မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့အကြား သာမန်နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ဗီဇာမလိုဘဲ သွားလာနိုင်ရန် အတွက် နှစ် နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့တို့အကြား စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ လက်ရှိတွင် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်များနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိများအနေ ဖြင့် သွားလာနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူတိုင်း သွားလာနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေစာချုပ်များဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ''ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ နှစ် နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်''ဟု ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန် အတွက် အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့နှင့် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရန် အတွက် နှစ်နိုင် ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိပါက ပြည်တွင်းသို့ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှု များအပြင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပါ တိုးတက်လာနိုင်ကြောင်း ပြည် တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသိုင်းအဝိုင်းက သုံးသပ်ပြောသည်။ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်ဟိန်း က ''လက်ရှိမှာ ဂျပန်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အလွန်စိတ်ဝင်စား တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူတို့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဖို့အကွက် အကွင်းတွေ ရှိနေတယ်လို့လဲယုံကြည်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ လူ မျိုးချင်းနီးစပ် မှုတွေကြောင့် မြန်မာပြည် ကိုလာချင်ကြတယ်။ နှစ်နိုင်ငံဗီ ဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ စီးပွားရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေတိုးလာနိုင်တယ်''ဟု သုံးသပ်ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗီဇာအမျိုးအစားလေးမျိုးရှိပြီး နိုင်ငံ ပေါင်း ၅၁နိုင်ငံ ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ဆိုက် ရောက်ဗီဇာ ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ သန်းနိုင်ဦး - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့အကြား သာမန်နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ဗီဇာမလိုဘဲ သွားလာနိုင်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့တို့အကြား စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီး ဌာန မှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်များနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိများအနေ ဖြင့် သွားလာနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူတိုင်း သွားလာနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေစာချုပ်များဦးစီးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက ''ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ နှစ် နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန် အတွက် အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့နှင့် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရန် အတွက် နှစ်နိုင် ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်ဟိန်း က ''လက်ရှိမှာ ဂျပန်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကို အလွန်စိတ်ဝင်စား တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူတို့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဖို့အကွက် အကွင်းတွေ ရှိနေ တယ် လို့လဲ ယုံကြည်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ လူ မျိုးချင်းနီးစပ် မှုတွေကြောင့် မြန်မာပြည် ကိုလာချင်ကြတယ်။ နှစ်နိုင်ငံဗီ ဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ စီးပွားရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေတိုးလာနိုင်တယ်''ဟု သုံးသပ်ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗီဇာအမျိုးအစားလေးမျိုးရှိပြီး နိုင်ငံ ပေါင်း ၅၁နိုင်ငံ ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်း ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ဆိုက် ရောက်ဗီဇာ ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖုန်းကျော်မိုးမြင့် (ဘယ်) နှင့် အစ်ကိုဖြစ်သူ စည်သူမိုးမြင့် (ညာ) အတူ လေ့ကျင့်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မြန်မာနိုင်ငံ ရွက် လှေ အဖွဲ့ချူပ်)
၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲရဲ့ရွက်လှေ အားကစား ပြိုင်ပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်း ငွေဆောင် ကမ်းခြေရှိ ငွေဆောင် ရွက် လှေ ကလပ်မှာ တပတ်ကြာ ကျင်းပ နေပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်က ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၅ မှ ၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် ညနေ ၆ နာရီမှာတော့ ဆုရ အားကစားသမားများကို ကြေညာပြီး ဆုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် စတဲ့ အာဆီယံ ၆ နိုင်ငံက အားကစားသမား ၁၂၅ ဦး ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နေပြီး ရွှေတံဆိပ် ၁၃ ခု ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွက်လွှင့် အားကစားနည်းဟာ တခြား အားကစားများနဲ့မတူဘဲ လေတိုက်နှုန်း အနေအထား(မိုးလေ၀သ ကောင်းမွန်မှု)၊ လှေနဲ့ အလေးချိန်တွေပေါ်မှာ မူတည်တဲ့အတွက် တခါတရံ ခန့်မှန်းသလို မဖြစ်တတ်တာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရေဒါ ရွက်လွှင့်နည်းကို ဒီဇင်ဘာ ၁၆ နဲ့ ၁၉ ရက်အထိ ပြိုင်ပွဲငယ် ၁၂ ပွဲ ရွက်လွှင့်ကစားပြီး မြန်မာက ထိပ်ဆုံးမှာ အမြဲ ရှိနေပါတယ်။
ရွက်လွှင့် ကစားနည်း ၁၃ မျိုးထဲက အသက် ၁၅ နှစ်အောက် အုပ်စုလိုက် ရွက်လွှင့် ပြိုင်ပွဲမှာ ထိုင်းက ရွှေတံဆိပ်၊ စင်္ကာပူ က ငွေ နဲ့ မလေးရှားက ကြေးတို့ကို ဆွတ်ခူးထား ပါတယ်။ ၃ ရက်တာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ အတွင်း ကျန်တဲ့ ရွက်လှေစီးနည်း ၁၁ မျိုး (Half Rater မှအပ)ထဲမှာတော့ မလေးရှားက ထိပ်ဆုံးက ပြေးနေပြီး ထိုင်းက ဒုတိယလိုက်နေပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ရေဒါ (Half Rater) ရွက်လှေ ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက စည်သူမိုးမြင့် နဲ့ ဖုန်းကျော်မိုးမြင့် တို့က ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ကို ဆွတ်ခူး ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မှာ စတင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ရွက်လှေပြိုင်ပွဲ ၁၃ မျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ရွက်လွှင့်သမား ၂၅ ဦး ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင် နေပါတယ်။ မြန်မာတွေ ရွှေတံဆိပ် ရရှိထားတဲ့ ရွက်လွှင့်နည်းတမျိုး ဖြစ်တဲ့ Half Rater (ရေဒါ) ရွက်လွှင့် ပြိုင် ပွဲဝင်နေသူ ၂ ဦးထဲက တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဖုန်းကျော်မိုးမြင့်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှာ ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ငြိမ်းငြိမ်း က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
ငွေဆောင် ရွက်လှေကလပ်နဲ့ အားကစားသမားများ တည်းခိုရာ အဆောက်အအုံ တို့ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လက စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရွက်လှေအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးမိုးမြင့်က ကုန်ကျစရိတ် အားလုံး ကျပ် ၁၅ ဘီလီယံ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆.၇ သန်းခန့်) နဲ့ တာဝန်ယူ ဆောက်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွက်လှေ ပြိုင်ပွဲတွေကို မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အားကစားသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ စုမြတ်စိုး၊ စည်သူမိုးမြင့်၊ ဖုန်းကျော်မိုးမြင့် နဲ့ ဝေပွင့်ဝါဘို တို့က ဦးဆောင် ရွက်လွှင့် ကြပါတယ်။ ကိုဖုန်းကျော်မိုးမြင့်ဟာ မြန်မာ့ ရွက်လှေအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးမိုးမြင့်ရဲ့ သားငယ်လည်း ဖြစ် ပါတယ်။
မေး။ ။ အခု ပြိုင်ပွဲမ၀င်ခင် ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့ ဘယ်လောက် အထိ အတွေ့အကြုံ ယူခဲ့ရလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီလိုမျိုး ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ ကျနော်တို့ ၂၀၀၁ တုန်းက ကျနော်နဲ့ ကျနော် အစ်ကို (စည်သူမိုးမြင့်) ရွှေရခဲ့တယ်။ ကျနော် တို့ ၂၀၀၂ ကိုရီးယား အေးရှားဂိမ်း အထိ (ရွက်လှေလွှင့်) ဆက်စီး ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ပြီးတော့ ဆက်မစီးတော့ဘူး။ မစီး တာက ၁၀ နှစ်လောက် ရှိပြီပေါ့။ ဒီပွဲအတွက် ပြင်ဆင်တာက ကျနော်တို့ ၂၀၁၂ က စပြီး ပြင်ဆင်တာ။ နိုင်ငံခြားပွဲတွေလည်း သိပ်ပြီးတော့ မပြိုင်ဖြစ်ဘူး။ ကျနော်တို့မှာ Experience အရဆိုရင် ၂၀၁၃ ဧပြီလ ဆီးဂိမ်း အကြို (Pre SEA Games) ဒီငွေဆောင်မှာ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက နိုင်ငံတကာကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ သြစတြေးလျက လာပြိုင်တယ်။ စင်္ကာပူကလည်း လာပြိုင်တယ်။ အဲ့ဒီ ပရီဆီးဂိမ်းမှာ ကျနော်တို့ ရွှေရတယ်။ ဒီပွဲထက် ပိုကြပ်တယ်။
မေး။ ။ ၁၀ နှစ်နားထားခဲ့ပြီးမှ အခုတခေါက် ပြန်စီးတော့ အတွေ့အကြုံတွေက ဘယ်လို ကွာသွားလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်နဲ့ ကျနော့် အစ်ကိုက ၈ နှစ် ၉ နှစ်သားကတည်း လှေစီးတာ။ Experience က ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လှေနဲ့ စီးဖို့ ဝေးသွားတာ ၁၀ နှစ်လောက်ရှိတဲ့ အတွက် အကုန် ပြန်စရတာပေါ့။ ကျနော်တို့မှာ ငယ်ငယ်လေးတည်းက အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ပြိုင်ဘက်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင်တော့ သူတို့က အမြဲ ပြိုင်နေတာ။ ဒီလှေ အမျိုးအစားနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီ့ပြင်လှေ အမျိုးအစားနဲ့ ပြိုင်တာပေါ့။ ကျနော်တို့ Experience တော့ ရှိပေမယ့် ကြိုးစားရမှာပေါ့။ Training တွေအများကြီး ဆင်းခဲ့ရတာပေါ့။
မေး။ ။ ငယ်ငယ်တည်းက နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ ဘယ်နှနှစ်သားလောက်လဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်နဲ့ ကျနော့် အစ်ကို စစီးတုန်းက ၉ နှစ်သားပါ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ကျနော့်အတွက် ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ ပွဲပေါ့။ အဲ့ဒီတုန်းက ကမ္ဘာ့ ချန်ပီယံပွဲ (World Championship) ကို တောင်အာဖရိကမှာ သွားပြိုင်ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီတုန်းက တောက်လျှောက်ပဲ၊ ၉ နှစ် ကနေ ၁၅ နှစ်အထိ စီးခဲ့တယ်။ ကျနော် ၂၀၀၁ ခုနှစ် ရွှေရတုန်းက ကျနော် ၁၆ နှစ်ပဲ ရှိသေး တယ်။ ကျနော်အစ်ကိုက ၁၉ နှစ်။
မေး။ ။ အခု ဒီပွဲ အတွက်တော့ ဘယ်လောက်အထိ မှန်းထားလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်။ ရွှေ ရဖို့ကို။ ရွှေ ရဖို့ကလည်း တော်တော်လေး ကျိန်းသေ နေပြီ။ နောက်ထပ် ၆ ပွဲလို သေးတယ်။ အဲ့ဒီ ၆ ပွဲမှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ ကျနော်လည်း မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်။ ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီးတယ်။ Protest တွေက ရှိတော့ ဒီနေ့မှ Result ထွက်မယ်။
မေး။ ။ မနေ့က စပြိုင်တဲ့ ပွဲမှာရော ဒီနေ့ရော Protest (ရွက်လွှင့် ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်အတွင်း စည်းကမ်း မလိုက်နာဟု ပြိုင် ဘက် အသင်း တခုခုမှ တိုင်တန်းလာခြင်း) တွေ ရှိလာနိုင်သေးလား။
ဖြေ။ ။ မနေ့ကတော့ စင်္ကာပူနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား Protest ရှိတယ်။ စင်္ကာပူ နိုင်တယ်လို့ကြားတယ်။ ဒီနေ့လည်း ရှိဦးမယ်၊ ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ နောက်မှာ ဘာ Protest မှမရှိဘူး။ (ကျနော်တို့လှေပြိုင်နေစဉ်) နောက်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ကျနော်လည်း သေချာမသိဘူး။
မေး။ ။ မနက်တုန်းက ပြိုင်ပွဲကို ကြည့်တဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ မြန်မာရဲ့ အနောက်မှာ ထိုင်းက ကပ်လိုက်နေတယ်။ တကယ်တမ်း ဒီပွဲစဉ် ၆ ပွဲပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ အပြိုင် ကြဲနေရတဲ့ အသင်းတွေက ဘယ်အသင်းတွေလဲ။
ဖြေ။ ။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော် ထင်တာကတော့ စင်္ကာပူနဲ့ ယိုးဒယား (ထိုင်း) လားမသိ။ သူတို့ ၂ ယောက် ကတော့ ငွေကို လုကြမှာပေါ့။ သေချာပေါက်တော့ ကျနော်မသိဘူး။ ကျနော် ထင်တာကတော့ စင်္ကာပူနဲ့ ယိုးဒယား ငွေလုကြမယ် ထင်တယ်။ နောက်ထပ် ၆ ပွဲ ကျန်သေးတယ်။ နောက် ၂-၃ ရက် အတွင်းမှာပါ။ တချို့ ရက် တွေမှာ ၃ ပွဲ ပြိုင်ရင် ပြိုင်မယ်။ ၁ ပွဲ ပြိုင်ရင်လည်း ပြိုင်မယ်။ မနက်ဖြန် ဘာလာမလဲ မသိဘူး။ ဒါက မိုးလေ၀သပေါ်မှာ ရာသီဥတုပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်တယ်။
မေး။ ။ ဒီ Class က အားကစားနည်း ၁၃ ခုထဲမှာ ရိုးရာ အားကစားတခု အဖြစ် ထည့်သွင်း ကျင်းပတာလို့ သိရတယ်။ တခြားပြိုင်ဘက် နိုင်ငံတွေကရော၊ တချို့နိုင်ငံအတွက် ဒီ ကစားနည်းက အသစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဒီအတွက်ရော ကွန်ပလိန်း တက်တာရှိလား။
ဖြေ။ ။ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ Half Rater စတုန်းက Half Rater က Double handed digging. ဒီလှေက Very Simple ဖြစ်တယ်။ တခြား လှေတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုပြီး Simple (ရိုးရှင်း) တယ်။ အဓိက ဘာကွာလဲဆိုတော့ Weight (အလေးချိန်) ကွာတယ်။ ကီလို ၃၃၀-၃၆၀ လောက် ရှိတယ်။ တခြားလှေတွေ ကျတော့ အဲ့ဒီ လောက် မလေးဘူးပေါ့။ ဒီလှေက စီးဖို့ ရှင်းပါတယ်။ ဘယ်ရွက်လှေ သမားပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလှေပေါ် တက်လိုက်တာနဲ့ စီးလို့ရ တယ်။ ပြိုင်ပွဲ မစခင်လည်း ကျနော်တို့ မဲလည်း နှိုက်ထားတယ် ဆိုတော့ လှေက အားလုံး Equal (အတူတူ) ဖြစ်နေ တယ်။ အားလုံး ကိုယ်ကျတဲ့လှေ ကိုယ်စီးပေါ့။ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ပဲ စီးရမှာ။
မေး။ ။ ဒီပြိုင်ပွဲက ကမ်းနဲ့ကျတော့ ဘယ်နှမိုင်လောက် ဝေးလဲ။ ပြိုင်ပွဲဝင်း အကျယ်ကရော ဘယ်လောက်ဝေးလဲ။ ကျမ တို့ မနက်က လိုက်ကြည့်တော့ အတော်လေး ဝေးတယ်။ မိုင်တော့ မခန့်မှန်းတတ်ဘူး ဆိုတော့လေ။
ဖြေ။ ။ ကျနော် မသိဘူးဗျ။ ပြိုင်ပွဲ(Race) ဧရိယာကတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ မီတာ ၅၀၀ ပတ် လည် ၀န်းကျင်လောက် ရှိမယ်။ ဘွိုင်ယာ လေးခု ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ Course က မီတာ ၅၀၀ လောက် ဝေးတယ်။ ဘယ်နှပတ် ပြိုင်ရမလဲဆိုတာ Race ကော်မတီက ဆုံးဖြတ်တယ်။ Outer Course ဆို အပြင်ဘွိုင်ကို ၃ ပတ်ပတ်။ Inner Course ဆို အထဲမှာပတ်။ ပွဲတွေ အတော်များများက ၃ ပတ်ပတ် ခိုင်းတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေမှာတော့ သေချာပြထား ပါတယ်။ ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ပန်းတင်
အမြန်လမ်းရဲစခန်းအပိုင် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၁၂/၄ နှင့် ၂၁၂/၅ ကြားတွင် မန္တလေးမှ ရန်ကုန်သို့ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ပါရမီရိပ်သာနေ ထွန်းမင်း(၄၈)နှစ် မောင်းနှင်သော ၆င/×××× မန်းရွှေပြည် အပြာရောင်ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်မှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ပေါင်းလောင်းတံတား ယာဘက်ထိပ်အား ဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့သဖြင့် ထွန်းမင်းအား ပန်းတင်အမြန်လမ်းရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၃၆/ ၂၀၁၃၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၂၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်တွင်းရှိစားသောက်ကုန်များ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု ယခင်ထက်ပိုမိုပြုလုပ်လာဟုဆို
ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ။ ။ ပြည် တွင်းရှိ စားသောက်ကုန်ထုတ် လုပ်ရောင်းချသူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု များ ယခင်ထက် ရာခိုင်နှုန်း၅၀ ခန့်ပိုမို၍ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ် လာကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်း ရှိ အစားအသောက်များမှတစ် ဆင့် အစာ အဆိပ် သင့် ဖြစ်ပွား မှုများ ဖြစ်ခဲ့သည့်အပြင် စား သောက်ကုန် များနှင့် ပတ်သက် သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စစ် ဆေးမှုများ ပိုမိုများပြား လာသော ကြောင့် အသား၊ ငါးနှင့် ဟင်း သီးဟင်းရွက် တင်ပို့ရောင်းချ သူများ အနေဖြင့် ယင်းတို့ ၏ စား သောက်ကုန်များတွင် ကျန်းမာ ရေး ထောက်ခံ ချက်များရရှိရန် ယင်းကဲ့ သို့ စစ်ဆေးမှုများ ပြု လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံ စားသောက် ကုန်ထုတ်လုပ် တင်ပို့သူများအသင်းမှ ဓာတ်ခွဲ ခန်း မန်နေဂျာ ဒေါက်တာအေး ကျော် က ပြောသည်။
ဒေါက်တာအေးကျော်က ''အရင်နှစ်က တစ်လကို အမျိုး အစား ၁၀ဝလောက် စစ်ရရင် အခုက ၁၅ဝလောက် စစ်ရ တယ်''ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တင် ပို့သူများအသင်းရှိ ဓာတ်ခွဲခန်း မှ စားသောက်ကုန်များ၏အာ ဟာရဓာတ်နှင့် အဏုဇီဝပိုးမွှား များကို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေး လျက်ရှိပြီး ယခင်နှစ်များအတွက် စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်လာသော ကြောင့် စားသုံးသူပြည်သူများ အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင် မည်များ ကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပြီး ကြိုတင် ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ယင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ဓာတ်မြေဩဇာဖျန်းထား သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ကို မဆင်မခြင်စားသုံး ပါ က အ သက်အန္တရာယ်အထိပါ ဒုက္ခ ရောက်နိုင်သောကြောင့် ယခု ကဲ့သို့ လုပ်ငန်းရှင်များ ပိုမိုစစ် ဆေးမှုများပြုလုပ်လာပါက စား သုံးသူများအတွက် အကျိုးအ မြတ်များစွာရနိုင်ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံ စားသုံးသူကြိုတင်ကာ ကွယ်ရေးအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗ အုပ်ခိုင်က ပြောသည်။
ကွမ်ကျို့အသင်းအား ၃ ဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် အလွယ်တကူ အနိုင်ရပြီးနောက FIFA Club World Cup ဖိုင်နယ်ပွဲသို့ ဘေယန်မြူးနစ် တက်ရောက်
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ အက်ဂါဒီယာမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က ယှဉ်ပြိုင် FIFA Club World Cup ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ၏ ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲတွင် ဂျာမနီကလပ် အသင်းကြီး ဘေယန်မြူးနစ်က တရုတ် နိုင်ငံမှ ကွမ်ကျို့ အဲဗားဂရန်း အသင်းကို ၃ ဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပွဲစဉ်တွင် ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းသည် တရုတ် ကလပ်အသင်းအပေါ် ကောင်းစွာထိုးဖောက်ကစား နိုင်ခဲ့ပြီး ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ချန်ပီယံ အသင်းအတွက် အဖွင့်ဂိုးကို ပြင်သစ် တောင်ပံ ကစားသမား ဖရန့်ရီဘာရီက ပထမပိုင်း မပြီးဆုံးမီ ငါးမိနစ် အလိုတွင် ဘောလုံးကို လှလှပပ ဆွဲယူသွားပြီး ကွမ်ကျို့ ဂိုးသမား ကျန်းချန်အား ဖြတ်ကျော်၍ ဘယ်ခြေဖြင့် သွင်းယူ ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းအတွက် ဒုတိယဂိုးကို ခရိုအေးရှား တိုက်စစ် မှူး မာရီအိုမန်ဇူကစ်က ပွဲချိန် ၄၄ မိနစ်တွင် အသင်းဖော် တစ်ဦး ဖြစ်သူ သီယာဂိုအယ်လ်ကန်တာရာ၏ ဖြတ်တင်ဘောကို ခေါင်းတိုက် သွင်းယူ ခဲ့သည်။ ကွမ်ကျို့ အသင်းသည် ကွာတား ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်တွင် ချန်ပီယံရှစ်ကြိမ် ရရှိထားသည့် အယ်လ်အလီ အသင်းအား ၂ ဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး ဆီမီး ဖိုင်နယ်သို့ တက်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ဘေယန်မြူးနစ် အသင်း အား ထိုးဖောက် ကစားနိုင်ရန် ရုန်းကန် နေခဲ့ရသည်။ ဒုတိယပိုင်း ပြန်စပြီး အချိန်တွင်လည်း ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းကသာ ဘောလုံးကို ထိန်းချုပ် ကစား နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၄၇ မိနစ်တွင် အယ်လ်လာဘာက ညာဘက် မှနေ၍ မျှောချ ပေးလိုက် သည့် ဘောလုံးကို မာရီယိုဂိုစ့်က အမှားအယွင်းမရှိ ထိန်းချုပ်ပြီး ကိုက် ၂ဝ အကွာမှ ဂိုးပေါက် ထောင့်အတွင်းသို့ ကန်သွင်း၍ ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းအတွက် အောင်ပွဲကို ပိုမိုခိုင်မာ စေခဲ့ သည်။ ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားမည့် ဗိုလ်လုပွဲ တွင် မော်ရိုကို ချန်ပီယံ ကလပ်အသင်းကြီး တစ်သင်းဖြစ်သည့် ရာဂျာကာဆာ ဘလန်ကာ အသင်း သို့မဟုတ် အသလက်တီကိုမင်နေးရိုးအသင်း တို့အနက် တစ်သင်းသင်းနှင့် ရင်ဆိုင် ရမည် ဖြစ်သည်။ အက်ဂါဒီယာ မြ၀တီ
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ အက်ဂါဒီယာမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က ယှဉ်ပြိုင် FIFA Club World Cup ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ၏ ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲတွင် ဂျာမနီကလပ် အသင်းကြီး ဘေယန်မြူးနစ်က တရုတ် နိုင်ငံမှ ကွမ်ကျို့ အဲဗားဂရန်း အသင်းကို ၃ ဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပွဲစဉ်တွင် ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းသည် တရုတ် ကလပ်အသင်းအပေါ် ကောင်းစွာ ထိုးဖောက် ကစား နိုင်ခဲ့ပြီး ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ချန်ပီယံ အသင်းအတွက် အဖွင့်ဂိုးကို ပြင်သစ် တောင်ပံ ကစားသမား ဖရန့်ရီဘာရီက ပထမပိုင်း မပြီးဆုံးမီ ငါးမိနစ် အလိုတွင် ဘောလုံးကို လှလှပပ ဆွဲယူသွားပြီး ကွမ်ကျို့ ဂိုးသမား ကျန်းချန်အား ဖြတ်ကျော်၍ ဘယ်ခြေဖြင့် သွင်းယူ ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းအတွက် ဒုတိယဂိုးကို ခရိုအေးရှား တိုက်စစ် မှူး မာရီအိုမန်ဇူကစ်က ပွဲချိန် ၄၄ မိနစ်တွင် အသင်းဖော် တစ်ဦး ဖြစ်သူ သီယာဂိုအယ်လ်ကန်တာရာ၏ ဖြတ်တင်ဘော ကို ခေါင်းတိုက် သွင်းယူ ခဲ့သည်။ ကွမ်ကျို့ အသင်းသည် ကွာတား ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်တွင် ချန်ပီယံရှစ်ကြိမ် ရရှိထားသည့် အယ်လ်အလီ အသင်းအား ၂ ဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး ဆီမီး ဖိုင်နယ်သို့ တက်ရောက် လာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ဘေယန်မြူးနစ် အသင်း အား ထိုးဖောက် ကစားနိုင်ရန် ရုန်းကန် နေခဲ့ရသည်။
ဒုတိယပိုင်း ပြန်စပြီး အချိန်တွင်လည်း ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းကသာ ဘောလုံးကို ထိန်းချုပ် ကစား နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၄၇ မိနစ်တွင် အယ်လ်လာဘာက ညာဘက် မှနေ၍ မျှောချ ပေးလိုက် သည့် ဘောလုံးကို မာရီယိုဂိုစ့်က အမှားအယွင်းမရှိ ထိန်းချုပ်ပြီး ကိုက် ၂ဝ အကွာမှ ဂိုးပေါက် ထောင့်အတွင်းသို့ ကန်သွင်း၍ ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းအတွက် အောင်ပွဲကို ပိုမိုခိုင်မာ စေခဲ့ သည်။ ဘေယန်မြူးနစ် အသင်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားမည့် ဗိုလ်လုပွဲ တွင် မော်ရိုကို ချန်ပီယံ ကလပ် အသင်းကြီး တစ်သင်းဖြစ်သည့် ရာဂျာကာဆာ ဘလန်ကာ အသင်း သို့မဟုတ် အသလက်တီ ကိုမင်နေးရိုးအသင်း တို့အနက် တစ်သင်းသင်းနှင့် ရင်ဆိုင် ရမည် ဖြစ်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုကို အနည်းနဲ့ အများတော့ လူတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့နေ ရပါတယ်။ စိတ် ဖိစီးမှု မဖြစ်အောင် နေထိုင်တာ အ ကောင်းဆုံး ဆိုပေမယ့်လည်း ဖြစ်လာပါ က အမြန်ဆုံးပြေပျောက် သွားအောင် လုပ် ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရေးသား လိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အ ခါ ပထမ ဆုံး စသိနိုင်တာက သင့်လည်ပင်းပါ။ အ များစုက ဇက်ကြောတက်တယ်လို့လည်း ပြောတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သင့်လည်ပင်းတောင့်တင်းလာပါက သင့် ညာဘက်လက်နဲ့ ဦးခေါင်းကိုကျော်ကာ ဘယ်ဘက်နားရွက်အနောက်နားကို ထိ ထားပြီး ဦးခေါင်းကို ညာဘက်ပခုံးဆီ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲပါ။ အဲဒီပုံစံအတိုင်း တစ်ဖက်ပြောင်းပြီး ပြုလုပ်ပေးပါ။ စိတ်ဖိ စီးမှုကြောင့် ဇက်ကြောတောင့်တင်းတာ သက်သာသွားစေပါတယ်။
(၂) တေးဂီတ နားဆင်ပါ
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့ လာမှုအရ နေ့စဉ် စိတ်ညစ်ညူးစရာတွေ တွေ့ကြုံရတာကြောင့် သွေးပေါင်အနည်း ငယ်တက်တာ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ တွေ့ ရပါတယ်။ လေ့လာသူတွေက တေးဂီတ နားဆင်တာနဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ နေထိုင်တာကို ယှဉ်ပြီး လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါ တေးဂီတ နားဆင်တာက သွေး ပေါင် ပိုမိုကျဆင်းစေတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ သင်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီး စိတ်ညစ်ညူးနေတဲ့အခါ တေးဂီတကို နား ဆင်တာက စိတ်ဖိစီးမှုကို အကောင်းဆုံး လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။
(၃) အသက်ရှုသွင်း ရှုထုတ်ဖို့ သတိရပါ
သက်သောင့်သက်သာ ထိုင်ပြီး သင့် မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထားကာ အာရုံစိုက် ပြီး အသက်ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်ပြုလုပ်တာ က စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်တဲ့ အ ကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခု ပါ။ ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ လေတွေက ခန္ဓာ ကိုယ်အနှံ့ကို ဝင်ရောက်သွားပြီး ရှူထုတ် လိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှ မလိုအပ်တာ တွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးပါတယ်။
(၄) ချွေးထွက်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
တစ်နေ့ကို မိနစ် ၄ဝ ကြာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေပါက ရေချိုးလိုက် တာ၊ နေ့လယ်စာ စားတာတွေ ပြုလုပ် လိုက်တာကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေ လျော့စေပါတယ်။ ရုံးကနေ အိမ်ပြန် ရောက်တဲ့အခါ အိမ်အနီးအနားပတ်ဝန်း ကျင်ကို လမ်းပတ်လျှောက်တာမျိုးတွေ လည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအား လုံးက စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ကျစေပြီး စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေပါတယ်။
(၅) နေ့ခင်း တစ်ရေးအိပ်ပါ
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် နေ့ခင်းတစ်ရေး အိပ်တာက သင်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို မောင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေ အရ နေ့ခင်းဘက်မှာ နာရီဝက်လောက် တစ်ရေးအိပ်စက်တာက နှလုံးတိုက်ခိုက် ခံရနိုင်ခြေ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိတာက ဦးနှောက်မှာ ဆီရိုတိုနင်ဟော် မုန်းထုတ် လုပ်မှုကို များစေပြီး စိတ်ကို တည်ငြိမ်ေ စပါတယ်။ သင့် အလုပ်မှာစိတ် ဖိစီးမှုများတဲ့ အခါ ရေခဲကို တဘက်လေး နဲ့ ထုပ်ပြီး ဇက်ပေါ်မှာ ၁၅ မိနစ်ကြာတင် ထားပေးပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရစေပြီး ဖိစီး မှုတွေ ပြေပျောက်သွား စေပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာ နိုးထပြီး ချိန်တွင် ချက်ချင်း ရေသောက်ခြင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပြည်သူ များစွာ အတွက် နေ့စဉ် ပြုမူ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အရေးပါသော ကျန်းမာရေး လုပ်ဆောင်မှုလေး ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ထို့အပြင် သိပ္ပံပညာရှင်များ သုတေသန ပြုချက်အရ ၎င်းဟာ အလွန် အရေးပါပြီး ကောင်းကျိုး များစွာ ဖြစ်စေတယ် ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ နံနက်ခင်း ရေသောက် ပေးခြင်း အားဖြင့် သင့်ရဲ့ တစ်ညတာ ပင်ပန်း တစ်ကြီး လှုပ်ရှား ခဲ့ရတဲ့ အစာအိမ် အတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်နေ့တာ အတွက် အဆင် မပြေမှုများ၊ စိတ်သောကများ အတွက်ပါ ရေရဲ့ အစွမ်းကြောင့် လန်းဆန်း သွားစေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ဂျပန် ဆေးပညာရှင် တွေက ၉၆ ပါး ရောဂါနှင့် များစွာသော အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါများ အတွက် အလွန်ပင် အစွမ်းထက်တဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ ခဲ့တာပါ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်း နွမ်းနယ်ခြင်း၊ အဆစ်မြစ် ရောင်ရောဂါ ဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးတုန်ခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန် ရောဂါ ဖြစ်ခြင်း၊ အသဲ အဆီဖုံးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာ ဖြစ်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ် ဖြစ်ခြင်း၊ တီဘီ၊ ဦးနှောက် အမြှေးရောင်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဝမ်းလျှော ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ကင်ဆာနှင့် ရောဂါ များစွာ အတွက် ရေကို နည်းလမ်း တကျ နံနက်တိုင်း သောက်သုံးခြင်း အားဖြင့် ရောဂါ များစွာကို ကြိုတင် ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်မှာပါ။ လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းကတော့ - ၁။ မနက် အိပ်ရာထပြီး သွားမတိုက်ခင် ၁၆၀ မီလီမီတာရှိ ဖန်ခွက်ဖြင့် ရေ ၄ ခွက် သောက်ပါ။ ၂။ ထို့နောက် သွားတိုက်၊ မျက်နှာ သစ်ပြီးပါက ၄၅ မိနစ်အတွင်း မည်သည့် အရာမှ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ ၄၅ မိနစ် ပြည့်ပြီးမှ ပုံမှန်အတိုင်း စားသုံးပါ။ ၃။ နံနက်စာ စားပြီး ၁၅ မိနစ်အတွင်း၊ နေ့လည်စာနှင့် ညစာစားပြီး ၂ နာရီအတွင်း အခြား အရာများ စားသောက်ခြင်း ရှောင်ပါ။ ၃။ ညစာစားပြီး ၁ နာရီခွဲ အတွင်း ဒါမှမဟုတ် ၂ နာရီအတွင်း အိပ်စက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ အထက်ပါ လုပ်ဆောင်မှု တွေကို သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ အတွက် ပုံမှန် လုပ်ဆောင် သွားပါက ဖျားနာခြင်း ကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကို လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ် .. မြ၀တီ
မနက်အိပ်ရာနိုထပြီးချိန်တွင် ချက်ချင်းရေသောက်ခြင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိပြည်သူများစွာ အတွက် နေ့စဉ် ပြု မူ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အရေးပါသော ကျန်းမာရေး လုပ်ဆောင်မှုလေး ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ထို့အပြင် သိပ္ပံပညာရှင်များ သုတေသန ပြုချက်အရ ၎င်းဟာ အလွန်အရေးပါပြီး ကောင်းကျိုး များစွာ ဖြစ်စေတယ် ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ နံနက်ခင်း ရေသောက် ပေးခြင်း အားဖြင့် သင့်ရဲ့ တစ်ညတာ ပင်ပန်း တစ်ကြီး လှုပ်ရှား ခဲ့ရတဲ့ အစာအိမ် အတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်နေ့တာ အတွက် အဆင် မပြေမှုများ၊ စိတ်သောကများ အတွက်ပါ ရေရဲ့ အစွမ်းကြောင့် လန်းဆန်း သွားစေ နိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်လှပအောင် လိမ်းခြယ်နေတဲ့ မိတ်ကပ်၊ အိုင်းရှဲဒိုး၊ Mascara နဲ့ နှုတ် ခမ်းနီတွေကို ညအိပ်ရာ မဝင်ခင် အချိန်မှာ သန့်စင်ပစ် လိုက်သင့်တယ် ဆိုတာ သင် သိပါရဲ့လား၊ မိတ်ကပ် အလှပြင်ပစ္စည်း တွေဖျက်တဲ့ Remover တွေကို ဈေးကြီး ကြီးပေးမဝယ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်မီးဖို ချောင်ထဲကနေ အလွယ်တကူ ဖန်တီးယူ လို့ရနိုင် ပါတယ်။
၁။ မျက်တောင်ဆိုးဆေး Mascara တွေ ကို ဖျက်ချင်ရင် သံလွင်ဆီကို ဝါဂွမ်း ဒါမှ မဟုတ် တစ်သျှူးမှာ အစက်ချလိုက်ပြီး မျက်တောင်ပေါ်မှာ ခဏလောက် ဖိကပ် ထားလိုက်ပါ။ စက္ကန့် ၂ဝ လောက်ကြာ ချိန်မှာ ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ရေ အေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။
၂။ သခွားသီးအရည်နဲ့ Baby Oil အနည်း ငယ်ကို ရောစပ်ပြီး ဂွမ်းဖတ်နဲ့တို့ကာ မျက်နှာပေါ်က မိတ်ကပ်တွေကို သန့်စင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
၃။ သံပရာခြမ်းနဲ့ မျက်နှာနဲ့ အရေပြား ပေါ်က အဆီပြန်တဲ့နေရာတွေကို ပွတ် တိုက်သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ညဘက်မှာ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ပေါ် နွားနို့အစိမ်းနဲ့ လောင်းလိုက်ပြီး စိုနေချိန်မှာ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ စက်ဝိုင်းပုံ နှိပ်နယ်ရင် မိတ်ကပ်ပျက် နိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာအဆီပြန်တာကို သက်သာစေပြီး သန့်စင်သွားစေပါတယ်။
၅။ အာလူးအရည်တစ်ဇွန်းထဲကို လိမ္မော် ရည် တစ်စက်ထည့်ကာ မျက်နှာပေါ်မှာ ငါးမိနစ်လောက် နှိပ်နယ်ပေးလိုက်ရင် အ မည်းစက်တွေ သက်သာစေပါတယ်။
၆။ ဂျုံမှုန်နဲ့ နွားနို့ကို ပျစ်နေအောင် ရော စပ်ပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ပေါင်းတင်ထား ကာ ၁ဝ မိနစ်ထားပြီး ပြန်ခွာလိုက်ပါ။ မျက်နှာကြေးချွတ်လိုက်သလို ဝင်းပသွား ပါလိမ့်မယ်။
၇။ ဂွမ်းစကို အာလူးအရည်ရွှဲနေအောင် ဆွတ်ပြီး အရေပြားပေါ်မှာ ၁ဝ မိနစ် လောက် ပွတ်တိုက်ပေးပြီး ရေဆေးချ လိုက်ပါ။ ချွေးပေါက်ကျယ်တာတွေ သက်သာကာ အညစ်အကြေး ကင်းစင် သွားနိုင်ပါတယ်။
၈။ ငှက်ပျောသီးနဲ့ နွားနို့ကို ပျစ်နေအောင် ရောစပ်ပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ၁ဝမိနစ်ထား ကာ ရေဆေးလိုက်ပါ။
၉။ ကလေးခေါင်းလျှော်ရည်ကို ဂွမ်းစပေါ် တင်ပြီး ရေစိုခံ Mascara တွေကို ဖျက် ပေးနိုင်ပါတယ်။
၁ဝ။ သစ်ချသီးနဲ့ ဂျုံမှုန့်ကို ရောစပ်အမှုန့် ပြုလုပ်ပြီး အရေပြားပေါ်ကို ရေဆွတ်ကာ ပွတ်တိုက်ပေးရင် ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ် ရှားပေးနိုင် ပါတယ်။ (ရေချိုးဆား ပုံစံမျိုး အသုံးပြုပါ)
ခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်သုံး ဆောင်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေး ကောင်း မွန် စေနိုင်ကြောင်း လေ့ လာ တွေ့ရှိ
လူတစ်ဦးသည် ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း များအား သွန်ခွန်စိုက် ပြုလုပ် ပြီးလျှင် စွမ်းအားပြည့် အချိုရည် များထက် ခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်အား သောက်သုံး သင့်ကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်များ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယင်းခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်သည် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဂလူးကို့စ် ပမာဏကို ပုံမှန် အနေအထားသို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်ပြီး ကြွက်သား များ စွမ်းအား ပြန်လည် သန်စွမ်း လာနိုင်မှုကြောင့် အခြားသော စွမ်းအားဖြည့် အချိုရည်များထက် ခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်ကို ပိုမိုသောက် သုံးသင့်သည်။ အားကစား သမားများသည် ယင်းတို့ လေ့ကျင့်ခန်း မပြုလုပ်မီ၊ ပြုလုပ်စဉ်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီး အချိန်များကို စမ်းသပ်မှတ်တမ်း တင်ထားပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် ခရမ်းချဉ် သီး ဖျော်ရည်သောက် သုံးခဲ့သည့် အားကစား သမားများသည် ကြွက်သားများ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် သန်စွမ်း ကောင်းမွန်လာ သည်ကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ပါဝင်သည့် ခန္ဓာ ကိုယ်ဓာတ်တိုး ပစ္စည်းများ ချေဖျက်နိုင် သည့်ပစ္စည်း (Anti-oxidants)များ သည် ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါနှင့် အခြားသော ဖျားနာမှု များအား တိုက်ဖျက်နိုင် သည်ကိုလည်း သိရှိခဲ့သည်။ ထုိ့အပြင် မြေထဲပင်လယ် တစ်ဝိုက် ၌ နေထိုင် သူများ၏ အစားအစာတွင် ခရမ်းချဉ်သီးကို ကျန်းမာရေး အတွက် သင့်လျော်သော အစားအစာ အဖြစ် ရွေးချယ်စား သုံးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဂရိသိပ္ပံ ပညာရှင်များ၏ နောက်ဆုံး သုတေသန ပြုလုပ်မှုအရ ခရမ်းချဉ်သီးသည် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ် ပြီးနောက် ကြွက်သားများ ပျက်စီးခဲ့ပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အင်ဇိုင်းနှင့် ပရိုတင်းဓာတ်တို့ အချိုး မညီမျှမှုကို ပြန်လည် အချိုးညီမျှ သွားစေရန် အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ၄င်းတွေ့ရှိချက်ကို အစား အစာနှင့် ဓာတု အဆိပ်များအား လေ့လာသည့် Elsevier သိပ္ပံ ဂျာနယ်၌ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။ မြ၀တီ
လူတစ်ဦးသည် ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း များအား သွန်ခွန်စိုက် ပြုလုပ် ပြီးလျှင် စွမ်းအားပြည့် အချိုရည် များထက် ခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်အား သောက်သုံး သင့်ကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်များ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယင်းခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်သည် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဂလူးကို့စ် ပမာဏကို ပုံမှန် အနေအထားသို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်ပြီး ကြွက်သား များ စွမ်းအား ပြန်လည် သန်စွမ်း လာနိုင်မှုကြောင့် အခြားသော စွမ်းအားဖြည့် အချိုရည်များထက် ခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်ကို ပိုမိုသောက် သုံးသင့်သည်။
အားကစား သမားများသည် ယင်းတို့ လေ့ကျင့်ခန်း မပြုလုပ်မီ၊ ပြုလုပ်စဉ်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီး အချိန်များကို စမ်းသပ်မှတ်တမ်း တင်ထားပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် ခရမ်းချဉ် သီး ဖျော်ရည်သောက် သုံးခဲ့သည့် အားကစား သမားများသည် ကြွက်သားများ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် သန်စွမ်း ကောင်းမွန်လာ သည်ကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရသည်။
ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ပါဝင်သည့် ခန္ဓာ ကိုယ်ဓာတ်တိုး ပစ္စည်းများ ချေဖျက်နိုင် သည့်ပစ္စည်း (Anti-oxidants)များ သည် ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါနှင့် အခြားသော ဖျားနာမှု များအား တိုက်ဖျက်နိုင် သည်ကိုလည်း သိရှိခဲ့သည်။
ထုိ့အပြင် မြေထဲပင်လယ် တစ်ဝိုက် ၌ နေထိုင် သူများ၏ အစားအစာတွင် ခရမ်းချဉ်သီးကို ကျန်းမာရေး အတွက် သင့်လျော်သော အစားအစာ အဖြစ် ရွေးချယ်စား သုံးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဂရိသိပ္ပံ ပညာရှင်များ၏ နောက်ဆုံး သုတေသန ပြုလုပ်မှုအရ ခရမ်းချဉ်သီးသည် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ် ပြီးနောက် ကြွက်သားများ ပျက်စီးခဲ့ပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အင်ဇိုင်းနှင့် ပရိုတင်းဓာတ်တို့ အချိုး မညီမျှမှုကို ပြန်လည် အချိုးညီမျှ သွားစေရန် အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ၄င်းတွေ့ရှိချက်ကို အစား အစာနှင့် ဓာတု အဆိပ်များအား လေ့လာသည့် Elsevier သိပ္ပံ ဂျာနယ်၌ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် - ဆောင်းကာလမှာ ဒုက္ခသည်တွေကို ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ
အေးချမ်းတဲ့ ဒီဇင်ဘာ ခရစ္စမတ်ကာလဟာ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်၊ မိသားစုတွေ ပြန်လည် ဆုံစည်းကြတဲ့ အားလပ်ရက် အချိန်အဖြစ် ကမ္ဘာတဝန်း သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်း နိုင်ငံရေး ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ဒဏ်တို့ကြောင့် ရေခြားမြေခြားနဲ့၊ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ၊ စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ နေနေရဆဲ လူတွေ သိန်းနဲ့ချီပြီး ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေ အိမ်ပြန်လာနိုင်ဖို့၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူ ပြန်နေနိုင်ဖို့ အစိုးရအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး စစ်ရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က ဘာတွေ လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်အတွေးတွေကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် စနေနေ့မှာ တင်ဆက်မယ့် ဘီဘီစီရဲ့ လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ် ၀၀၄၄ ၂၀၃ ၆၁၄၄ ၀၆၄ ကို ဖြစ်စေ၊ [email protected] အီးမေးလ်ကို ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အမည်၊ ပြန်လည် ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ခေါ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ အကျဉ်းကို ပြောခဲ့ရင် ဘီဘီစီက ဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်။
BBC Burmese Facebook ရဲ့ Message ကနေလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Facebook သို့မဟုတ် မျက်နှာဖုံး စွပ်ပွဲတော်ထဲ ကျွံဝင်နေသော ကမ္ဘာအစစ်
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးတက် သာလွန်မှု များနှင့် ပြောင်းလဲမှုများ ကိုသိရန် မြေပြင်သို့ ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း လေ့လာရန် မလိုတော့သည့် ခေတ်မှာ လွန်ခဲ့ သည့်နှစ် အနည်းငယ်မှ စခဲ့သည် ဟုဆိုလျှင် မယုံနိုင်ဖွယ် မရှိ။ ကမ္ဘာကြီး မှာ ရွာကြီးတစ်ရွာ သာသာဖြစ်လာခဲ့ ချိန်၌ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ အတွက် ကုန်းတစ် တန်၊ရေ တစ်တန်၊ လေတစ်တန် ကူးလူးသွားလာရန် မလို အပ်တော့။ ထိုအခြေအနေ၊ ထိုခေတ် တစ်ခေတ်ကို ဆိုရှယ်မီဒီယာ များဟု ခေါ်ဆိုသည့် လူမှုကွန်ရ က်များ ကဆောင်ကြဉ်းပေး ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ လူတို့သည် ဝေးကွာနေသည့် မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ ချစ်ခင်ရသူများနှင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဆက်သွယ်နိုင်မည့် စနစ်အပေါ်မည် သူမျှ လျစ်လျူရှုထား ကြမည် မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်ပင် လူမှု ကွန်ရက်သည် တီထွင်သည့်နိုင်ငံတို့ တွင်သာမက အခြားနေရာ ဒေသများသို့ ပါလွယ် ကူလျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့နေပြီး၎င်းမှာ လူမှုကွန်ရက် ဆက်သွယ် မှုကောင်း မွန်သည့် အချက်ကြောင့် ဆိုလျှင် မှား နိုင်ဖွယ် မရှိပေ။
ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုမှု တွင်ကျယ် လာသည်နှင့်အမျှ ကောင်းကျိုး သာမက ဘေးထွက်လာသည့် ဆိုးကျိုးများပါ တွေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ အကောင်း ဘက်ဖြင့်ကြည့် မည်ဆိုလျှင် လူမှုကွန် ရက်ကြောင့် သာမန်လူတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်ရှင်သန်နေရသည့် ဦးလှကြိုင် မှ သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင် သခင်လှကြိုင် ဖြစ်လာရသည်ကို မည်သူမှ မငြင်းနိုင်။ ယင်းက ဖေ့စ်ဘွတ်၏ ထိရောက်မှု တစ် ခုဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် သွေးလှူ ဒါန်းမှုလိုအပ်နေပါသည်ဟူသည်မှ စ၍ ‘လေးစားစွာ ပန်ကြားပါသ ည်’ဆိုသော အချက်အလက်များအထိ လူမှုစာမျက် နှာပေါ်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း မလို လားအပ်သည့် ဆိုးကျိုးများ ပေါ်ပေါက် လာနိုင်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း၌ပင် သတင်းဖြန့်ချိပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ပြင်ပ ပဋိပက္ခမှုခင်း မျာဖြစ်ပွား လာစေနိုင် သည့်အပြင် သူတစ်ပါးအပေါ် ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုများလည်း လွန်စွာလုပ် ဆောင်လာနိုင်ကြသည်ဟု ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ဘာသာမာ စတာတန်း တက်ရောက်နေ သည့် ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူတစ်ဦးဖြစ်သော မယဉ်ဝင်းထိုက်က သူ့အမြင်ကို ပြောပြသည်။ဝါရင့်သတင်းစာဆရာဖြစ်သည့် ဦးရဲနိုင်မိုးကမူ ”ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပြောရရင်တော့ လူမှုရေးကိုကျော်လွန်ပြီး တော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာကိစ္စတွေ အတွက်ပါ ထဲထဲဝင်ဝင် သုံးလာကြတယ်”ဟု ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ကျယ်လာနေသည့် ပုံစံ အပေါ်မှတ်ချက် ပေးသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ပျံ့နှံ့မှု စီးဝင် မှုပြင်းထန်လာခြင်း၏ အကြောင်းပြချက် ကား အဘယ်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်မည် ဆိုလျှင် ….
အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံဖြင့် ဖန်တီးသည်
‘လူမှုကွန်ရက်’ဟူသည့် အမည်နာ မနှင့်အညီ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ သည့် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ နိုင်ငံတကာ၌ မည်သို့အ သုံးပြုနေကြသည်ကို တိကျ စွာစစ်တမ်းမကောက်ယူနိုင်။ သို့သော် ပြည်တွင်းတွင် လူမှုရေးထက်ကျော်လွန် သည့်ကိစ္စများ၊ သတင်းဖြန့်ချိမှုများ၌ ထဲထဲဝင်ဝင် အသုံးပြု လာနေကြသည်ဟု သတင်းစာဆရာ ဦးရဲနိုင်မိုးက ဆိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ အဓိကတစ်ခုအနေနှင့် ဖြစ် လာခြင်းက ပြည်တွင်း၏ အခြားသော ဆက်သွယ်ရေးနည်း လမ်းများ အားနည်း နေခြင်းကြောင့်လည်း ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တစ်မုဟုတ်ချင်း အရေးပါလာပြီး ယင်း သို့ ဖြစ်လာခြင်းက ကောင်းမွန်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြု သည်။”သတင်း စီးဆင်း မှု မြန် ဆန်လာ တယ်”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်၏ ကြီးမားစွာပျံ့နှံ့လာနေမှုမှာ ၁၅ဝဝ ကျပ်တန် တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းများပေါ်ပေါက်လာပြီး နောက်ပိုင်း၌ ပိုမိုသိသာလာခဲ့ပြီး ဈေးသည်အချို့မှ အစ နိုင်ငံ့ အရေး ဆောင်ရွက်သူများ အဆုံးအသုံးပြုလာနေကြပြီဟု7Days သတင်းဌာန၏ အကြီးတန်းသတင်းထောက်ဖြစ်သူ ကိုဥက္ကာကိုကိုက ဆို သည်။”အခြေခံ လူတန်း စားေ တွ အင် တာနက်သုံးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးသင့်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ မိုးလေ ဝသသတင်းကြည့်တတ်ရမယ်လေ”ဟု ကိုဥက္ကာကိုကိုက ဖေ့စ်ဘွတ် နယ်ပယ် ကျယ်ပြော ရာတွင် လူတန်းစားများစွာ ပါဝင်လာသင့်ပုံကို ညွှန်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
တရားဝင်သတင်းဌာနကြီးများမှ မီဒီယာလက်နက်တစ်ခုအဖြစ် ဖေ့စ် ဘွတ်အား အသုံးပြုလာခြင်းမှာမူ ယခင် က ထားရှိခံခဲ့ရသည့် စာပေစိစစ်ရေး၏ အကျိုး ဆက်ကြောင့် ဟု ဥပဒေပညာရှင် ဦးမင်းတေဇညွန့်တင်က သုံးသပ်မှတ် ချက်ပေးသည်။ ယင်းကာလများအတွင်း တွင် တင်ပြလိုသည့် သတင်းများမှာ စာပေစိစစ်ရေး၏ လှီးဖြတ်မှုဒ ဏ်ခံခဲ့ ရပြီး ပေးလိုသည့်မက်ဆေ့ခ်ျ၊ သတင်း ရသများပျောက်ဆုံးခံရခြင်းကြောင့် စာပေစိစစ်ရေး ပျက်သုဉ်းသွားသည့် နောက်ပိုင်း သတင်းဌာနများအနေနှင့် သတင်းကို တိုတိုနှင့်လိုရင်း ထိမိစွာ ပေးနိုင်ရန် လူမှုကွန်ရက်ကို အသုံးပြု လာခြင်းဖြစ်မည်ဟုလည်း ဦးမင်းတေဇ ညွန့်တင်က ဆိုသည်။ ”ဒါတွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရမ်းတင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရဲ့ အလွန်အနေနဲ့ ပေါက်ထွက်လာတာပါ” ၎င်းက ပညာရှင်တစ်ဦး၏ ဖေ့စ် ဘွတ်တွင်ကျယ်မှု အကြောင်းအကျိုး သုံးသပ်ချက်များဖြစ်သော်လည်း ဖေ့စ် ဘွတ်အသုံးပြုသူ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ရူပဗေဒဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ မရွှေရည် ကမူ ”ဖေ့စ်ဘွတ်သုံး ရတာ ကောင်းပါ တယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်က သုံးတတ်ရင် အကျိုးဖြစ်ပါတယ်”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
”လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်သိက္ခာ တွေက စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြိုလဲသွား နိုင်တဲ့ဟာမျိုး ဖြစ်နေပြီ”ဟု ဦးမင်းတေ ဇညွန့်တင်က ဖေ့စ်ဘွတ်၏ ထိရောက်မှု အရှိဆုံးအကျိုး ဆက်ကို ဆိုသည်။ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် ကျော် လွန်လာသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ပြည်တွင်းရှိ သန်းခြောက်ဆယ်သော လူဦးရေအား လုံး သုံးစွဲနေနိုင်ခြင်းတော့ မဟုတ်။ အ သုံးပြုသူရာခိုင်နှုန်းနည်းသော်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ လျှော့တွက်မရ သည့်အနေအထားမျိုး ဖြစ်လာသည်က အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အဆိုပါမေးခွန်း အပေါ် သတင်းစာဆရာဦးရဲနိုင်မိုးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။ ¤င်း၏အဖြေ မှာ လက်ရှိဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ရာခိုင် နှုန်းနည်းပါးသော်လည်း ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုသူများမှာမူ လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ အရေးပါသည့် လူတန်းစားများ ဖြစ်နေ ကြသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ”ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် နဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ပညာ တတ်လူငယ်နဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့ အစည်းမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အလွှာထဲမှာပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။ လူမှုကွန်ရက်မှ သတင်းကွန်ရက် သို့ ချဉ်းကပ်လာနေသည့် ဖေ့စ်ဘွတ် ပေါ်မူတည်၍ အရေးကြီးလာသည့် အချက်မှာ အဆိုပါသတင်းများကို စောင့်ကြည့်ဖတ်ရှုနေသည့် စာဖတ်သူ များ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း ဖြစ် သည်ဟု ဆိုရမည်။ မည်မျှပင်စိတ်ချရ သည့် သတင်းဌာန၊ ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့် ယုံ ကြည်ရသည့် သတင်းသမားတစ်ဦး တင်ဆက်သည့် သတင်းများပင်လျှင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးတည်း တင်ဆက်နေရ သည့်အတွက် မှားနိုင်ခြေရှိပြီး ယင်းသို့ အာမခံချက်ပေးနိုင်သည့် သတင်းဌာန မျိုးမဟုတ်သော အခြားနေရာများ၏ သတင်းပျံ့နှံ့လာမှုကိုမူ သုံးစွဲသူများ၏ စိစစ်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းက များစွာ အ ထောက်အပံ့ပေးမည်သာဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူ၏ ယုံလွယ်မှုများနှင့် သတင်း သမားများ၏ မှန်ကန်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများရှိခဲ့ သည်ကို သတိချပ်သင့် ကြောင်း ဦးရဲနိုင်မိုးက ပြောသည်။
အပျော်တမ်း သတင်းဖြန့်ချိမှုများ ရောယှက်လာသည့်နောက်ပိုင်း ဖေ့စ် ဘွတ်အသုံးပြုမှုအပေါ်တွင် တာဝန်သိ မှုများလည်း ထပ်ပေါင်းရန်လိုအပ်လာ သည်။ ၎င်းကို ဦးရဲနိုင်မိုးက သတင်းသမားများတွင်ကျင့်ဝတ်ဟုခေါ်သည့် Ethic ရှိပြီး အင်တာနက်ပေါ်၌လည်း Nethic ဟုခေါ်သည့်အင်တာနက် ကျင့်ဝတ်ရှိသင့်သည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ အင်တာနက်ကျင့်ဝတ်ကို ထိန်းသိမ်း စောင့်စည်းနိုင်ခြင်း မရှိလျှင်တော့ ဘေး ထွက်ဆိုးကျိုးများ ပြန်လည်ခံစားရလာ မည်ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။ ထိုနေရာတွင် အပျော်တမ်း သတင်းဖြန့်ချိသည့် လူမှုကွန်ရက်များ၏ တာဝန်သိမှုကလည်း အရေးပါသည်။ ကြိုက်နှစ်သက်သူ သုံးသန်းနီးပါးရရှိထား ပြီး သတင်းဖြန့် ချိမှုမြန် ဆန်လာသည့် ‘အေးချမ်းမွန်”လူမှုစာမျက်နှာကမူ ၎င်းအနေနှင့် သတင်းဌာနမဟုတ်သည့်အပြင် ဝါသနာအရသတင်းများမျှဝေပေး နေခြင်း သာဖြစ် သည့်အတွက် ကိုယ် ပိုင်ခံစားချက်ဖြင့် ရေးသားသော သတင်းများမှလွဲ၍ အခြားသောသတင်းများကိုမူ မူရင်းသတင်းဌာနသို့ Credit ပေးသည်ဟု ပြောသည်။ ဤသည်က အ ပျော်တမ်း သ တင်းဖြန့်ချိမှု၏ တစ်နည်းတစ်ဖုံ တာဝန်သိမှုဟု ဆိုရမည်လော။ သတင်းဌာနတစ်ခု မဟုတ်သော် လည်း အင်တာနက်ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာ ဖြင့် အွန်လိုင်းသတင်းလောကတွင် နေရာရနေပြီဖြစ်သည့် ‘သစ်ထူးလွင်’ ပေ့ခ်ျအနေနှင့်မူ လူမှု ကွန်ရက်အင်တာနက်စာမျက်နှာများအပေါ် တာဝန်ခံမှု နှင့် တာဝန်ယူမှုများစွာ ထားရှိရန် မလို ဟုသူ၏အမြင်ကို ဖြေကြားသည်။ ထိုသို့ ထင်မြင်ရခြင်း က ဖေ့စ် ဘွတ်၌ ရေးသား ဖြန့်ဝေသည့်ခံစားချက်၊ သတင်းနှင့် ဝါဒ ဖြန့်ချိမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးစွဲသူများ က ခွဲခြားနားလည်နေပြီ ဖြစ်ခြင်း ကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် တာဝန် ယူမှုမရှိခြင်းက ပြင်ပအသုံးပြုသူများ အတွက် ကြီးလေးသည့်ပြဿနာမဖြစ် နိုင်သော်လည်း သတင်းဌာနများ သာမ က အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုမှု တွင်တော့ တာဝန်ယူမှုကို ချန်လှပ်မထားခဲ့သင့်ကြောင်း သုံးသပ်မှု များ ရှိလာသည်။ သတိ သင့်ထံတွင် တာဝန်ရှိသည် အထက်ပါ သုံးသပ်ချက်များအ တိုင်း သတင်းမီဒီယာများနှင့် အစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အသုံး ပြုမှုတွင်မူ ‘တာဝန်’ယူနိုင်မှု ရှိရန် လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်း ကိုယ်စားပြု တင် ပြမှုများတွင် ပိုမိုသာလွန်သည့် တာဝန် ယူမှုများရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုလည်း ဦး ရဲနိုင်မိုးက ဆိုသည်။
”သာမန်ပြည်သူ ပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းသမား ပဲဖြစ်ဖြစ် လူရှေ့သူရှေ့မှာ ကိုယ် ထုတ်မပြောရဲတဲ့ စကားတစ်လုံးကို အင် တာနက်ပေါ်မှာလည်း မတင်သင့်ဘူး”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ၏ ဝါရင့် သတင်းဌာနများဖြစ်သည့် AP, AFP နှင့် Reuters သတင်းဌာနများတွင် သတင်းသမားများအတွက်လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုရာတွင် လိုက်နာရမည့် လမ်း ညွှန်ချက်များ ချပေးထားပြီးယင်းလမ်း ညွှန်ချက်များက ဆိုရှယ် ဆိုက်သုံးစွဲမှု အပေါ် ပိတ်ပင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့ မှာ သတင်းဌာန ကိုယ်စားပြုနေသူများ ဖြစ်၍ ကိုယ်ပိုင်လူမှုစာမျက်နှာမှ အရမ်း ကာရောမှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ ပြဿနာ များတွင် တစ်ဖက်စောင်းနင်း ဝင်ရောက် ရေးသားခြင်းနှင့် အယ်ဒီ တာတည်း ဖြတ်မထားရသေးသည့် သတင်းများ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိမသွားစေ ရန် စောင့်ကြည့်ခြင်း သဘောမျိုးသာဖြစ် သည်ဟုသိရသည်။
သတင်းသမား တစ်ဦး အနေဖြင့် ရေးသားမှုများ၌ အလောတကြီး လုပ် ဆောင်ရန်မသင့်ဘဲ အထူးသဖြင့် မိမိ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ မိတ်ဆွေများ ပြားသည်ဆိုပါက တင်ပြမည့် အချက် အလက်များ သေချာစိစစ် တင်ပြရန်လို သည်ဟု7Days ၏ အကြီးတန်း သတင်းထောက် ကိုဥက္ကာကိုကိုက ဆိုသည်။ ၎င်းမှာ ဆဲဆိုမှုပေါင်းများ စွာ နှင့် တကွ ရရှိခဲ့သည့်သင်ခန်းစာဖြစ်သည် ဟုလည်း ဆိုပြန်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက လူမှုကွန်ရက်၌ အနုပညာရှင်များ၏ မူး ယစ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖိုင်များ ဖွင့် ချပြခဲ့သည့် ”မိုးဇေညိမ်း”စာမျက်နှာ အနေဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်သည် လူ့အဖွဲ့ အစည်းအတွက် ကောင်းမွန်မှုများ ရှိ စေသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ အတွက် လှုံ့ဆော်မှုများလည်း ရှိနေ သည်ဟု ပြောသည်။ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အနေနှင့် အထက်ပါဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖိုင်များ စာမျက်နှာ အထက်တွင် တင်ပြခဲ့ရသည့် ရည်ရွယ် ချက်ကိုလည်း ပြောပြသည်။
”ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အာဏာ ရှင်ခေတ်မှာ ပြည်သူတွေ မသိအောင် လျှို့ဝှက်ထားတာတွေကို ပြည်သူတွေ လည်း သိသင့်တယ်လို့ ယူဆလို့ပါ”ဟု သူကဆိုသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ဖော်ထုတ်မှုမှာ ယခုမှမဟုတ်လွန်ခဲ့သည့် ရှစ်နှစ်ခန့်ကပင် သတင်းဌာနအချို့နှင့် ဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ဖူးပြီး ၎င်းတို့မှလည်း လုံခြုံရေးအရ အချက် အလက်အနေနှင့်သာ သုံးစွဲခဲ့ကြသည်ဟုလည်း ရှင်းလင်း သည်။ အဆိုပါကိစ္စအတွက် တာဝန်ယူ လိုမှုအပေါ်တွင် ‘မိုးဇေညိမ်း’က ”တရားရုံးရောက်တဲ့အထိ တာဝန် ယူနိုင်မလားဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်ဘယ်သူဆိုတာ ပေါ်ပေါက်သွားတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ လက်ရှိ အခြေအနေအရတော့ ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ လူရှေ့မှာ ထွက်ပြလို့ မရနိုင်တဲ့အခြေ အနေရှိပါတယ်”ဟု ဖြေကြားသည်။
ဆေးရှိသော်လည်း မလွှမ်းခြုံနိုင်သေး သည့်ရောဂါ
ထိုထိုသော အကျိုးအကြောင်းများ စွာဖြင့် ပျံ့နှံ့လာသည့် လူမှုကွန်ရက်၌ တင်ပြသည့် သတင်းနှင့်အချက်အလက် များ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံတာဝန် ယူနိုင်မည် ဆိုသော်လည်း အချို့သော ကိစ္စများမှာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်နေခြင်းကြောင့် ချင့်ချိန်မှုကို နှလုံးသားဖြင့် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လာ မည်ဖြစ်သည်။ တာဝန် ခံနိုင်မည်ဆို၍ တင်ပြလိုက်ခြင်းကြောင့် တစ်ဖက်သား ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိနေမည်ဆိုပါက မည်သို့သော အခြေအနေဖြင့် ပြန်လည် ကုစားကြမည် ဆိုသည် က ပြဿ နာတစ် ရပ်ဖြစ်လာသည်။ ယင်းသို့သော အခြေအနေကို ထိန်းကျောင်းနိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသော စည်းရိုးမှာ ‘ဆိုက်ဘာ’ဥပဒေသာဖြစ်မည် ဟု ဥပဒေပညာရှင် ဦးမင်းတေဇညွန့် တင်က ပြတ် သားစွာပြောကြားသည်။ ယင်းမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ၏ လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုများ ဗရမ်းဗတာ မဖြစ်စေရန်ကိုလည်း ၎င်းအချက်နှင့် ပင် တိကျစွာ ထိန်းကွပ် ထားနိုင်သည်ကို တွေ့ရမည်။ သို့သော်ပြည်တွင်း၌ အချိန် ကာလ တစ်ခုအားဖြင့် အနည်းငယ်ကြာ မြင့်ဦးမည်ဟု ထင်ရသည်။ ‘ဆိုက်ဘာ’ဥပဒေကို ပြည်တွင်းအတွက် Asia Foundation အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပင်မကျောရိုး ပြီးစီးသည်အထိ ရေးဆွဲခဲ့ ကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းဥပဒေမှာ ပြည် ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည် ဆိုခြင်းကြောင့် ဥပဒေအကြမ်းကို လွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဦးမင်းတေ ဇညွန့်တင်က ဆိုသည်။ လူမှုကွန်ရက် သည် ယခုထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ကျယ် ပြန့်လာမည် ဆို ပါက ၎င်းနှင့်ဆက်စပ် သည့်ရောဂါများအတွက် တစ်ခုတည်း သော ကုသနိုင်မည့်ဆေးမှာ ‘ဆိုက်ဘာ’ဥပဒေသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအ ကောင်းဒွန်တွဲနေခြင်းမှာ လောကနိယာ မ တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ယင်းအပေါ်တွင် လိုက်ပါနေကြရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့်သာ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာမှု ပြုလုပ် ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ လူမှုကွန်ရက် ၌ အကျိုးမရှိဟုဆိုပါလျှင် အသုံးပြုသူ များက ကမ္ဘာအဝှမ်းသန်းနှင့်ချီ ရှိလာ ရန်အကြောင်းမရှိ။အကယ်၍ သင့်ထံ တွင် ဝမ်းသာ ဖွယ်ဝမ်းနည်းဖွယ် အကူအညီတောင်းခံ လိုမှု၊ အများ သိစေရန် ကြေညာလိုမှုများ နှင့် မကျေနပ်မှုများ ထုတ်ဖော်ရန် အချိန် များစွာမလို အပ်တော့။ ထို့အတွက် နာမည်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် များဖြင့် အသုံးပြုရသည့် လူ မှုကွန်ရက်တစ်ခုသာ ရှိနေရန်လိုပါသည်။ ခလုတ်တစ် ချက်နှိပ် လိုက်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းရှင် အဖြစ် သင့် စိတ်ကြိုက်ကမ္ဘာတစ်ခု ဖန် တီးရန်သင်အိပ်မက်မက် နေသည် မဟုတ် လော။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေကို အမျိုးသမီးတွေ ဘာကြောင့် ကြိုက်ရတာလဲ
တစ်ခါတစ်လေ ချစ်သူရည်းစားရှိပြီးသား အမျိုးသားတွေကို အမျိုးသမီးတွေ တန်းတန်းစွဲကြိုက်နေတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ သင်မြင်တွေ့ဖူးမှာပါ။ ရည်းစားလုံးဝမထားဖူးတဲ့သူဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေက လှည့်ကို မကြည့်ချင်ကြဘူး။ ရည်းစားထားဖူးပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရည်းစားနဲ့ပြတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများတွေလို မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်က ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ပုံ၊ ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်နေတတ်တဲ့သူ ဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီပဲ။ အဲ့ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးဆိုရင် ရည်းစားရှိရှိ၊ အိမ်ထောင်ရှိရှိ အမျိုးသမီးတွေ သဘောကျကြတာ ဘာကြောင့်များလဲဆိုပြီး အဖြေရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့
၁။သင်ဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါ
လူတွေရဲ့စိတ်မှာ မရတာကို ပိုလိုချင်တဲ့စိတ်လေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ခုလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ ကိုယ်က သူတို့နဲ့ အလှမ်းဝေးကွာတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးလို့ သူတို့ထင်ရင် သူတို့ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားနေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ခပ်ဝေးဝေး ခပ်ကင်းကင်းနေနိုင်လေ၊ နေပြလေ သူတို့စိတ်ကို ကိုယ်ကပိုလွှမ်းမိုးနိုင်လေလေပါပဲ။
၂။သင်ဟာ သူမကို စိတ်လုံခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါ
ကိုယ်နဲ့ အတူရှိနေတဲ့အချိန်တွေ သူမပျော်နေမယ်။ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်နေတာမျိုးထက်စာရင် ကိုယ့်ကို သူ့အကြောင်းတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာမယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကိုတောင် ဖွင့်ဟတိုင်ပင်တဲ့အထိ သင်ဟာ စမတ်ကျတဲ့ ယောင်္ကျားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။
၃။သင်ဟာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါ
ယောင်္ကျားတွေအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်မနေရင်တောင်မှ ကိုယ်နဲ့တွဲတဲ့ အမျိုးသမီးက နာမည်ကြီးတဲ့ အနုပညာရှင် ဒါမှမဟုတ် လူကြားထဲပေါ်ပြူလာသိပ်ဖြစ်လွန်းတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ သင်လည်း သူ့ကိုမှီပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာမှာပဲ။ အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲ အကျိုးအမြတ်ကတော့ သင့်ကို အမျိုးသမီးတွေ အားလုံးက ၀ိုင်းပြီး အာရုံစိုက်လာကြပြီပေါ့။ ဒါကတော့ အကျိူးအမြတ်တွက်ပြီး စနစ်တကျ စီစဉ်တဲ့အကွက်ကြီးပါ။
၄။ သင်ဟာ လွယ်ကူလွန်းတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးထက် အထာရှိတဲ့ယောင်္ကျားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါ
အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ့်ကို ချစ်လှပါချည်ရဲ့၊ ကြိုက်လှပါချည်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေထက် အကြောမာမာနဲ့ အထာကျတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ကိုယ်က ခုလက်ရှိ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ကိုယ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တောင် ဘေးကနေ ကိုယ်တို့နှစ်ဦးရဲ့အရိပ်အခြေကို ကြည့်ပြီး ဒီအချစ်ဂိမ်းထဲ ၀င်ကစားချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။
၅။သင်ဟာ သင့်ရဲ့ချစ်သူအတွက် ပြည့်စုံတဲ့ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ
မိန်းကလေးတွေဟာ ယှဉ်ပြိုင်ချင်စိတ် မြင့်မားကြပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူ အဆင်ပြေနေတာ သူတို့ သိနေ၊ မြင်နေရပေမယ့် ကိုယ်ဟာ သိပ်မိုက်တဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်လို့ သူတို့ ခံစားရတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ဘေးကနေ လှုပ်ခတ်လာအောင် ကစားချင်လာကြပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တဲ့ သဘောလည်း ပါမှာပေါ့လေ။ အဓိကအချက်ကတော့ ကိုယ်လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ရည်းစားထက် သူတို့ ဘယ်လောက်သာတယ်ဆိုတာကို ပြချင်တဲ့ သဘောပါပဲ။
၆။သင့်ချစ်သူက သင့်ကောင်းကြောင်းတွေ အားလုံးရှေ့ တတွတ်တွတ်ပြောတဲ့အခါ
မိန်းကလေးအချင်းချင်း ငါ့ရည်းစားက ဘယ်လိုတော်တာ၊ ဘယ်လိုမိုက်တာ ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက သူ့သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေကြားမှာ ကိုယ့်ကောင်းကြောင်းတွေ ချည်း ပြောပြောနေတတ်ပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကိုယ်က စူပါစတားပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုမြင်တာနဲ့ အထင်ကြီးတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်တတ်သလို ကိုယ့်လိုချစ်သူမျိုးသာ သူတို့ရခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ အမျိုးသမီးတွေ ခေါင်းထဲမှာ နေရာယူသွားပါပြီ။
ကိုယ့်အပေါ် နားလည်ပြီး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ပါက အချစ်ဆိုတာကို လက်ခံမည် ဆိုသည့် Patricia
ဘုန်းနေလ(ဒဂုံတက္ကသိုလ်)| ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် အားပေးလို့နေသည့် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး၏ အနုပညာလှုပ် ရှားမှုများက စိပ်လို့လာသည်။ ကြော်ငြာများ၊ မဂ္ဂဇင်းတွင် သူမ၏ အနုပညာများက သူမကို ပိုမိုပြီးထင် ကျန်စေရစ်စေခဲ့ပြန်သည်။ တစ်လောက သူမ၏ အချစ်ရေး နှင့်ပတ်သက်ပြီး အားလုံးက စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံရပြီးနောက်တွင် သူမ၏ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တဲ့သတင်းကို အားလုံးက ကြားခဲ့မိချိန်က ကရုဏာသက်မိ ခဲ့ကြသည်။ သူမ၏ ချစ်သူကလည်း အနုပညာလောကထဲတွင် အကယ်ဒမီရပြီး နာမည်ကျော် တစ်ဦး ဖြစ်သော်လည်း သူမနှင့်အသက်အရွယ် ကွာဟလို့နေသူဆိုပြီး ပြောဆိုကြသည်။
“ညီမ အဲဒီအချိန်တုန်းက အရမ်း ငယ်သေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ညီမအတွက် ပထမဦးဆုံး အချစ်ကို ယုံကြည်မိခဲ့တာပါ။ အသည်းကွဲခြင်းက ဘာဆိုဘာမှ မသိခဲ့ချိန်တုန်းကလေ” ဟု ပြောသည်။
သူမကို ယခုအချိန်တွင် ရည်းစားထပ်ပြီးထားရန် စဉ်းစားထားလားဟု မေးကြည့်ခဲ့ရာတွင် အချစ်ဆိုတာကို သူမအနေဖြင့် လောလောဆယ်တွင် မထားရှိသေးဘဲ အလုပ်ထဲတွင်သာ စိတ်ကို နှစ်မြှုပ်ထားကြောင်း ပွင့်လင်းစွာ ဆိုသည်။
သူမအပေါ် နားလည်ပြီး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ပါက အချစ်ဆိုတာကို လက်ခံမိမှာပါလို့ ဆိုခဲ့ပြန်သည်။ ယခု အချိန်တွင် အသက် ၁၆ နှစ်သာရှိသေးသည့် သူမအနေနဲ့ အချစ်ဆိုတာကို ခံစားနားလည်ခဲ့ချိန်က အပျို စင်ဘ၀ကို ထိန်းသိမ်းနေထိုင်ခဲ့ခြင်းသည် မြန်မာမိန်းကလေးအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သည့် ဂုဏ်တစ်ခုကို ပိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
မြန်မာမိန်းကလေးတွေအနေဖြင့် များစွာထိန်းသိမ်းနေထိုင်သင့်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းဖြင့် ဖြတ်သန်းကြပါက လန်းဆန်းပြီး မညှိုးသောပန်းများ လောကအလယ် တွင် ဂုဏ်တင့်စေနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ဘီယွန်းဆေး၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဗီဒီယို Drunk In Love
လွန်ခဲ့သော သုံးရက်ခန့် ကမှ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကို အံ့အားသင့်စေခဲ့သည့် ဘီယွန်ဆေးသည် ယခု တစ်ခါတွင်လည်း အံ့သြဖွယ်ပျော်ရွှင်မှု တစ်ခုကို ထပ်မံ ချပြလိုက်ပြန် ပါသည်။ သူမ၏ သီချင်း ဖြစ်သော ‘Drunk In Love’ ကို ရိုက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယို ဖိုင်တွင် သူမနှင့် သူမ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရက်ပါဂျေးဇက် တို့မှာ ကမ်းခြေတစ်ခု တွင် ပျော်ရွှင်မြူး တူးနေကြသည်။
သူမမှာ အလွန် ပါးလွှာသော ကိုယ်ကျပ်ရေကူး ဝတ်စုံ အနက်ရောင်ကို ဝတ်ဆင်ထားလျက် ညချမ်း အချိန်အခါ တွင် သဲသောင်ပြင်ပေါ် ၌ ရေလှိုင်းများ နှင့် ဆော့ ကစားနေ ပုံကို အနုပညာ မြောက်စွာ ရိုက်ကူးထားသည်။
သဲသောင်ကမ်းစပ် တစ်လျှောက် တွားသွား၍ ညှို့ဓာတ်ပြင်းပြင်းနှင့် ကပြ ရင်း သီချင်းဆိုနေသည့် ဘီယွန်ဆေး ၏ ပုံရိပ်များကို အထင်းသားမြင်နိုင်လေ သည်။
” အလင်းရောင် အောက်မှာ ဖြာကျ နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစား တွေအတွက် မကျေနပ်စရာ မရှိပါဘူး” ဟု သူမ ကပြောကြားခဲ့ပြန်သည်။
ထို့အပြင် သူမ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ က သူမကို သိုင်းဖက်ထားသည့် စိတ်လှုပ် ရှားဖွယ် ဇာတ်ဝင်ခန်း များဖြင့် ရိုက်ကူး ထားသော ‘Drunk In Love’ အယ်လ် ဘမ်မှာ ချပ်ရေ ၆၁၇ဝဝဝ ရောင်းချခဲ့ရ ၍ ဤအပတ် အတွက် ဘေလ်ဘုတ်၏ ထိပ်ဆုံး ၂ဝဝ တွင် ပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။
Bill Board ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းအပုဒ် ၁၀၀ စာရင်းမှာ နှစ်ပတ်ဆက်တိုက် ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေတဲ့ အမ်မင်နမ်နဲ့ ရီဟားနားရဲ့ စုံတွဲသီချင်းသစ်
ရက်ပ်အဆိုတော် အမ်မင်နမ်နဲ့ အဆိုတော် ရီဟားနားတို့ရဲ့ စုံတွဲသီချင်းသစ် The Monster ဟာ အမေရိကန် Bill Board ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းအပုဒ် ၁၀၀ စာရင်းမှာ နှစ်ပတ်ဆက်တိုက် ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ contactmusic.com မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမ်မင်နမ်နဲ့ ရီဟားနားတို့ရဲ့ The Monster သီချင်းအသစ်ဟာ စတင်ထွက်ရှိတဲ့ နေ့ကနေစပြီး နှစ်ပတ်ကြာသည် အထိ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်း ၁၀၀ ရဲ့ ထိပ်ဆုံး နေရာမှာ ဆက်တိုက် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်း ၁၀၀ စာရင်းရဲ့ ဒုတိယနေရာနဲ့ တတိယနေရာ မှာလည်း ယခင်တစ်ပတ်က အတိုင်း Pitbull နဲ့ Kesha တို့တွဲဖက် သီဆိုထားတဲ့ Timber သီချင်းနဲ့ One Republic အဖွဲ့ရဲ့ Counting Stars သီချင်းတို့က ဆက်လက် ရပ်တည်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Bill Board ရဲ့ အရောင်းရဆုံး အယ်လ်ဘမ်စာရင်း မှာတော့ ကြေညာထားခြင်း မရှိဘဲ ရုတ်တရက် ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ ဘီယွန်းစ်ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အသစ်က ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်လျက် ရှိပါတယ်။
ဘီယွန်းစ်ဟာ သူ့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ် အသစ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ရောင်းချခဲ့ရာမှာ လက်ရှိ အချိန်ထိ အချပ်ရေ ၆၁၇,၀၀၀ အထိ ရောင်းချခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမ်မင်နမ်နဲ့ ရီဟားနား တို့ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် တုန်းကလည်း Love The Way You Lie လို့အမည်ရတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် တွဲဖက် သီဆိုခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီ သီချင်းဟာလည်း ယခု The Monster လိုပဲ Bill Board ရဲ့ လူကြိုက် အများဆုံး သီချင်းစာရင်းမှာ ရက်သတ္တပတ် အတန်ကြာအောင် ရပ်တည်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။
Myanmar Gazette မြန်မာ့ဂဇက် သတင်းစာ Vol.1, Issue.3
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က Sea Games ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားမောင်မယ်များသို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)
အမိနိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသော အားကစားပြိုင်ပွဲဝင် မောင်တို့ မယ်တို့ -
(၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ ယနေ့အချိန်အခါမှာ ပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားမောင်မယ်များဟာ လှေခွက်ချည်းကျန် အလံမလှဲသော စိတ်ဓါတ်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်လျက် ကြိုးစား ယှဉ်ပြိုင် နေကြတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်နေရသလို ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးကလည်း နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ အမျိုးသားရေးစိတ်နဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးကြလျက် ရှိပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော အားကစား ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုတံဆိပ်တွေကို ရယူနိုင်ခဲ့တာဟာ မောင်တို့မယ်တို့ရဲ့ အနှစ်နှစ်အလလ အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့မှုတွေရဲ့ ရလဒ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲမှာဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ မျှော်လင့်ချက် တွေကို ထမ်းပိုးထားခဲ့တဲ့ သမီးငယ်တွေဟာ အမိနိုင်ငံရဲ့ သမီးကောင်းရတနာများပီပီ တတ်နိုင်သမျှ ဆိုတာထက် သာလွန်တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ သန့်ရှင်းမျှတတဲ့ အားကစားစိတ်ဓါတ်၊ အသင်းလိုက် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ မခိုမကပ်တမ်း ကြိုးစားအားထုတ်မှု တို့ကို စံနမူနာ အတုယူဖွယ်ရာ လက်တွေ့ပြသခဲ့ကြတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူများ ကိုယ်စား ချီးကျူးဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်။
ရွှေတံဆိပ်ဆု၊ ငွေတံဆိပ်ဆု၊ ကြေးတံဆိပ်ဆုတွေ အသီးသီး ရယူနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အားကစားမောင်မယ် တွေအတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်ပြီ ဖြစ်သလို ဆုတံဆိပ် မရရှိခဲ့ကြပေမယ့်လည်း အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ကြပြီး ကံအကြောင်း မလှလို့ ဆုတံဆိပ်တွေနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ကြရတဲ့ မောင်မယ်တွေအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူအားပေးလျက် ရှိပါတယ်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း ဆိုရင်လည်း ရွှေတံဆိပ် ဆုကို မရရှိနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပြည်သူတွေပေးတဲ့ ချန်ပီယံဆုကို ရရှိခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပါပဲ Sea Games အားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးအစားအသီးသီးမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ အမိနိုင်ငံရဲ့ သားကောင်း ရတနာ၊ သမီးကောင်း ရတနာ အားကစားမောင်မယ်တွေ အားလုံးကို တစ်နိုင်ငံလုံး ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တစ်ခဲနက် အားပေးလျက် ရှိနေကြပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းနဲ့ Sea Games ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ မှတ်တမ်းသစ်တွေ ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်တဲ့ အားကစားမောင်မယ် အားလုံးအတွက် ပြည်သူအားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကြရမယ့် အားကစား ပြိုင်ပွဲအသီးသီးမှာလည်း “မြန်မာ” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ်၊ “မြန်မာ” ဆိုတဲ့ အမျိုးသားရေး သိက္ခာကို အစွမ်းကုန် မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြမယ် ဆိုတာကိုလည်း အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ်စီတာဝန် ကျေပွန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့ အားကစား မောင်မယ်များအားလုံး ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း နိုင်ငံ့ပုံရိပ်နဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်အောင် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း မြှင့်တင်နိုင်ကြ ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
(မူလစာမျက်နှာ - president-office.gov.mm)
မြန်မာအမျိုးသမီးဘော်လုံးပွဲ နိုင်ရန် သိန်း ၂၅၀၀ ရမယ်
မြန်မာအသင်းက မလေးရှားအသင်းကို ၆ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ယူသွားပါပြီခင်ဗျာ ...
မြန်မာ6ဂိုး မလေးရှားသုံည
ယင်းဆုငွေများအား အလှူ ရှင်များအဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲချုပ်ဥက္ကဌဦးဇော်ဇော်မှ သိန်း ( ၅၀၀ )
ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေ သိန်း ( ၅၀၀ )
Grand Myanmar မှ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေ သိန်း ( ၅၀၀ )
Alpine ရေသန့်မှ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေ သိန်း ( ၃၀၀ )
ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီမှ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေ သိန်း ( ၂၀၀ )
Red Link ကုမ္ပဏီမှ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေ သိန်း ( ၂၀၀ )
ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီမှ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေ သိန်း ( ၂၀၀ )
အား/ ကာ မှ ကုမ္ပဏီမှ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေ သိန်း ( ၁၀၀ )
နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးဘောလုံအဖွဲချုပ်မှ ရွှေဆွဲကြိုး တစ်ကုံးစီ
ဆုကြေးငွေ စုစုပေါင်း သိန်း (၂၅၀၀ ) ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲချုပ်ပြန်ကြားရေးနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ဌာန မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။
ဆီးဂိမ်း အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ တတိယ နေရာလုပွဲကို ဒီနေ့ ညနေ ၄ နာရီ မန္တလာသီရိကွင်းမှာ အိမ်ရှင် မြန်မာနဲ့ မလေးရှား အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာအသင်းက ၆- ၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။
နာမည်ကြီး ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် Justin Bieber က အဆိုတော်အဖြစ် သူ့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု ကို စွန့်လွှတ်နေ ပြီး သူဟာ အနားယူနေပြီလို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
သူ့အနာဂတ် ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတဲ့ အမေးကို သူက အခုလို ဖြေလိုက်တယ်။
“ အယ်လ်ဘမ်အသစ်လား၊ ကျနော်က တကယ်ပဲ အနားယူနေပြီး ကျနော်က အနားယူနေတဲ့ လူပဲ၊ ကျနော် အချိန်နည်းနည်းတော့ ယူမယ်။ ဂီတကို စွန့်မလားလို့ ကျနော် တွေးနေတယ်” လို့ ဂျပ်စင်ဘီဘာက ပြော လိုက်တာပါ။
အသက် ၁၉ နှစ်ရှိတဲ့ Justin Bieber က အခုလို ကြေညာလိုက်တာဟာ ကမ္ဘာတလွှား ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေ ရဲ့ မျက်ရည်တွေ မြစ်တစင်းအလား စီးဆင်းသွားမလားပါဘဲ။
သူဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ကိုလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူ၊ သူ့ ဂီတ၊ သီချင်းတွေကလည်း အရမ်း ကို အောင်မြင်နေတာဆိုတော့ ဘာကြောင့် ဂျပ်စတင် ဘီဘာ အခုလိုပြောလိုက်သလဲ ဆိုတာ ကျမလည်း စဉ်းစားမရပါဘူး။ သူကလည်း သတင်းတွေမှာ ဘာကြောင့် အခုလို ဂီတကို စွန့်ခွာမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။
သူ့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အသစ်ကို လာမယ့် သတင်းပတ် ထွက်မယ့်ကိစ္စမှာ တေးဂီတ ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ သူဟာ
နောက်ဆုတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီး ဒါရာ ရာသက်ပန် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့တော့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပ်စတင် ဘီဘာဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကာလီဖိုးနီးယားက လော့စ်အိန်ဂျလီစ်မှာ ရေဒီယို သတင်းဌာနတခုနဲ့ သူ့ ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အသစ်အကြောင်း ပြောရင်း သူဟာ အနားယူနေပြီဖြစ်တဲ့ လူတယောက်ပဲလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူဟာ အနုပညာရှင် တဦးအဖြစ် ကြီးပြင်းချင်တယ်လို့ ပြောပြီး သူ့အနုပညာကို ရင့်ကျက်ချင်လို့ နောက် ထပ်ခြေတလှမ်း ထွက်လှမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း Mail Online သတင်းတပုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
တလောကပဲ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်တာတွေထဲက တခုကတော့ အတော်ကို ပွဲဆူသွားစေခဲ့တာပါ။ သူဟာ နောက်ထပ် လူတွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင်မယ့် ကျော်ကြားစေတဲ့ အိုင်ဒီယာအသစ်မရှိတော့ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။
လူတွေက သူ့ကို မာန်မာနထောင်လွှားပြီး ရန်ုလိုတတ်သူလို့ ထင်ကြပေမယ့် သူက မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းလည်း ဂျပ်စတင် ဘီဘာက ပြောပါတယ်။
ဂျပ်စတင်ရဲ့ အဖွားဖြစ်သူကတော့ အခုလို သူ့အနေနဲ့ ဂီတကိုစွန့်လိုက်တဲ့အပေါ် သဘောမတူဘူးဆိုတာ လည်း သတင်းဌာန တခုနဲ့ ထုတ်ပြောထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ ယူကျူက သီချင်းအယ်လ်ဘမ်ကတော့ သွားကြည့်ကြတဲ့ အကြိမ်ပေါင်း ၂ သန်းခွဲတောင် ကျော်သွားပါပြီ။ ဧရာဝတီက ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသားဘောလုံးအသင်း ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေ ရယူရေး အိပ်မက်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားကို ရှုံးပြီး အုပ်စုအဆင့် ကတင် မြန်မာအသင်း ထွက်ခွာသွားခြင်းနဲ့အတူ ပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်၊ အားမလိုအားမရ၊ မချင့်မရဲ ဖြစ် ကြရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးက သူတို့ရဲ့ ဒေါသတွေကို အကြမ်းဖက်မှု၊ ဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့အတူ ပေါက်ကွဲပြ လိုက်ပါတော့တယ်။
ဆီးဂိမ်းက မြန်မာအမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းမြင်ကွင်တခု၊ ဓာတ်ပုံ- မြန်မာဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် စာမျက်နှာ
ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ မြန်မာဘောလုံးအသင်းရှုံးနိမ့်ရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ရာ မှာ၊
မြန်မာအသင်း နည်းပြချုပ် ပက်ဆောင်ဟွာ က Head to Head စံနစ် (ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရာမှာ အနိုင်ရတဲ့ အသင်းကို ဦးစားပေးတဲ့စနစ်) ကို မသိလို့ပါလို့ ပြောသလို၊ နည်းပြချုပ် ပက်ဆောင်ဟွာနဲ့ တိုက်စစ်မှုး
ကျော်ကိုကို တို့အကြား ပြသနာ ရှိလို့ ကျော်ကိုကို က ထိုင်ကန်တော့မှ ဒုတိယပိုင်းမှာ ၀င်ကစားခွင့်ရတယ် လို့ လည်း ကြားရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က နည်းပြချုပ် ပက်ဆောင်ဟွာ ကို ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားကို မြန်မာအသင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ သတင်းတွေ၊ မြန်မာဘောလုံး ပရိတ်သတ်ရဲ့ ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ သတင်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကြားရပြီးတဲ့နောက် Eleven media ကလည်း U 23 အသင်းမန်နေဂျာ ဦးစိုးမိုးကျော်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ video သတင်းကိုလည်း တွေ့ရပါ တယ်။
ဦးစိုးမိုးကျော် ရှင်းထားတဲ့အထဲမှာ Head to Head စနစ်ကို နည်းပြချုပ် ပက်ဆောင်ဟွာ အနေနဲ့ မသိစရာ မရှိကြောင်း၊ သူတို့အနေနဲ့ အစည်းအဝေးတိုင်းမှာ ရှင်းပြကြောင်းနဲ့ ပက်ဆောင်ဟွာရဲ့ အားနည်းချက်တွေ
ဖြစ်တဲ့ တယူသန်တာ၊ သူသိ၊ သူတတ်၊ သူ့ကို အကြံပေးရင် နားမထောင်တာတွေကိုဘဲ အဓိကထား ပြော သွားပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိတာက နည်းပြချုပ် ပက်ဆောင်ဟွာကို Sea Games မစမီက မှ ခန့်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဘရူနိုင်းဘုရင့်ဖလား အပြီးကတည်းက ခန့်ထားတာလို့ ဦးစိုးမိုးကျော်
ခန့်ထားတဲ့အခါမှာလည်း စာချုပ်စာတန်းနဲ့ နှစ်ဖက်သဘောတူမှ ခန့်တာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ တကယ်လို့ ပက်ဆောင်ဟွာရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ တယူသန်မှုတွေက စာချုပ်ပါအချက်တွေ၊ မြန်မာ
ဘောလုံး အသင်း အတွက် အောင်ပွဲတွေ ရယူမပေးနိုင်ဘူးလို့ ယူဆရင် စာချုပ် သက်တန်းပြည့်တဲ့ အထိ စောင့်စရာမလိုဘဲ စောစောစီးစီး လမ်းခွဲသင့် ခွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပက်ဆောင်ဟွာဟာ လူတဦးတယောက်ရဲ့ စကားကိုဘဲ နားထောင် တယ်ဆိုရင် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တာဝန်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် (English Primer League) ဘောလုံးပွဲတွေမှာလည်း အသင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် အကောင်အထည်မဖော်ပေးနိုင်ဘူးလို့ ယူဆတဲ့ နည်းပြတွေ၊ မန်နေဂျာတွေ ကို စောစောစီးစီး လမ်းခွဲကြတာပါဘဲ။
ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဘဲ စပါး (Totttenham Hotspur) အသင်းက လေဗာပူးအသင်း (Liverpool) အသင်းကို ၅ ဂိုးပြတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက် အသင်းမန်နေဂျာဖြစ်သူ Andre Villas-Boas ကို ထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
Andre Villas-Boas ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ချယ်ဆီး (Chelsea) အသင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကလည်း ၉ လနဲ့ဘဲ အထုတ်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ကျော်ကိုကို က အသင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ သူမရှင်းတာ မေးတဲ့ အတွက်
မေးရကောင်းလား ဆိုပြီး ပက်ဆောင်ဟွာက ဒေါသပေါက်ကွဲတာ၊ ကျော်ကိုကို ကို ဖျောင်းဖြတဲ့နေရာ မှာ လည်း ကြီးတဲ့သူ၊ တာဝန်ရှိတဲ့သူ၊ ဆရာသမားဆို ဘာမှ အကျိုးသင့်၊ အကြောင်းသင့် ပြန်ပြောခွင့် မရှိဘဲ သူတို့ပြောသမျှနာခံဖို့ သွန်သင်ဆုံးမတာလည်း တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း တွေအတွက် လမ်းလွဲနေ တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဦးစိုးမိုးကျော်ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေမှာ မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ရိုက်ချိုးသလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ အတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေတာထက်၊ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်အနေနဲ့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစား ပံ့ပိုးပေးပေမယ့် အခုလို ရှုံးနိမ့်မှုမျိုးကြုံရတဲ့အတွက် ဦးဇော်ဇော်အတွက် ယူကျုံးမရဖြစ်ပြီး မျက်ရည်လေး စမ်းစမ်း၊ စမ်းစမ်းနဲ့ ၀မ်းနည်း နေပုံရပါတယ်။
ကျနော်တို့မြန်မာဘောလုံးအသင်း ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ ကြေကွဲနေချိန်မှာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ ယခု အချိန်ထိ ရွှေ့တံဆိပ်အများဆုံးနဲ့ နိုင်ငံအလိုက် ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေသလို၊ ထိုင်းအမျိုးသား အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းတွေဟာလည်း ရွှေရယူ နိုင်မယ့် အနေအထားတွေ တွေ့နေရပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံကတော့ ထိုင်းတွေကို ဘောလုံးအပါအ၀င် အားကစား၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအရ ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်သေးတာ လက်တွေ့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အားကစားအနေနဲ့ပြောရရင် ထိုင်းတွေက မျက်စေ့ရှေ့မှာတင် စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်နိုင် ကြလို့ အားကစားအဆင့်အတန်း မြင့်လာတာ တွေ့ရမှာပါ။
ကျောင်းတွေမှာ (အစိုးရကျောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း) ကလေးတွေကို ကျောင်းစာတခုထဲ သင်ကြားပေး တာ မဟုတ်ဘဲ၊ အများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ (project)၊ အားကစားတွေပါ လေ့ကျင့် သင်ကြား
ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်၊ ထူးချွန်ပြီး နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားတွေကို မွေးထုတ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်တောင်၊ ဘောလုံး၊ လက်ဝှေ့၊ အလေးမ၊ ရေကူး၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ ဘောလီဘော စတဲ့ အားကစားတွေ မှာ မြန်မာမပြောနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေကပါ ထိုင်းတွေကို မယှဉ်နိုင်ကြပါဘူး။
ထိုင်းအမျိုးသမီး ဘောလီဘော အသင်း ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတယ်လို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ က ကြက်တောင်ကစားသမား Ratchanok Intanon ခေါ် May ဟာ အသက် (၁၈) နှစ်ဘဲရှိသေးပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် အမျိုးသမီး တဦးချင်း ကြက်တောင်ချန်ပီယံလည်းဖြစ်၊ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး ချန်ပီယံလည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ထိုင်းလက်ဝှေ့သမားတွေဟာလည်း ဒေသတွင်းမှာသာမက အိုလံပစ်လို ကမ္ဘာ့အဆင့်ပွဲတွေ မှာပါ
ရွှေတံဆိပ်တွေ ဆွတ်ခူးပေးနိုင်တာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါတွေဟာ စနစ်တကျ ပြုစုပျိုး ထောင်ပေးတဲ့ ရလဒ်တွေ လို့ မြင်ပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသားဘောလုံးအသင်း ရွှေအိပ်မက်နဲ့ လွဲခဲ့အပြီး ဘောလုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားလုံးရဲ့ မျှော်လင့် ချက် ဟာ မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းပေါ် ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိ သွားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့မှာကန်တဲ့ ထိုင်းအမျိုးသမီးနဲ့ပွဲမှာ နည်းစနစ်ပိုင်းနဲ့ တဦးချင်းကျွမ်း ကျင် မှုမှာ ထိုင်းတွေက သာပေမယ့်၊ မြန်မာ အမျိုးသမီးအသင်းကတော့ မလျော့သော ဇွဲ၊ လုံ့လနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်သွားတာ မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။
ဒိုင်တွေရဲ့ အားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာအမျိုးသမီး အသင်းဟာ သာမန် မိနစ် ၉၀ အတွင်း ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းထားတဲ့ ထိုင်းအသင်းကို ချေပ ဂိုးပြန်သွင်းနိုင်တာ။ အချိန်ပို ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာလည်း ထိုင်းတွေက ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းထားပေမယ့် မဆုတ်မနစ်နဲ့ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရင်း ချေပဂိုးရအောင် စွမ်းဆောင် သွားနိုင်ပါတယ်။
ပယ်နယ်တီကန်သွင်း ဆုံးဖြတ်ရာမှာတော့ (၉ : ၈) ဂိုး (စုစုပေါင်းဆို ၁၁ : ၁၀ ဂိုး) နဲ့ ရှုံးနိမ့်သွား ပါတယ်။
ပယ်နယ်တီဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး အကျော်အမော် ကစားသမားတွေတောင် လွဲချော်တတ်တာမို့ ဒါဟာ ရာနှုန်းပြည့်နားလည်ပေးလို့ရတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသားအသင်း နောက်ဆုံးထွက်ခွာသွားရဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ကန်တဲ့ပွဲမှာ မြန်မာအသင်း က ကစားသမားတွေလည်း အနိုင်ရဖို့၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘောလုံးရွှေအိပ်မက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးဖို့ ကြိုးစားကန်ကြမှာဖြစ်ပေမယ့်၊ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်း ထိုင်းအသင်းကို ရင်ဆိုင်၊ ယှဉ်ပြိုင်သွားတဲ့ စိတ် ဓာတ်နဲ့ ကြိုးစားမှုကိုတော့ မမီဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာ ထိုင်းအသင်းကို ဘောလုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ အရ အနိုင်ပေး လိုက်ရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အနိုင်မခံ၊ အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်၊ သန့်သန့်ရှင်း ရှင်းနဲ့ အိမ်ရှင်ပီသစွာ ယှဉ်ပြိုင် သွားတဲ့ မြင့်မားတဲ့ စိတ်အခြေခံတွေကတော့ သူတို့ကို မရှုံးနိမ့်စေခဲ့ပါဘူး။
မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ သူတို့အပေါ်စာနာနားလည်မှုနဲ့ လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုမှုကို အကောင်းဆုံး ရယူ သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမယ့် နည်းစနစ်၊ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ ဦးဆောင်မှု အုပ်ချုပ်မှုတွေ၊ အရှုံး ကို ရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့အခါ တဦးကို တဦးအပြစ်ပုံချနေမယ့်အစား စနစ်တကျ သုံးသပ်မှုတွေ၊ လက်ခံမှုတွေနဲ့ အတူ အားကစားသမားတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ် ဓာတ်၊ အသန့်ရှင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကသာ မြန်မာ့အားကစား အဆင့်အတန်း ကို မြှင့်တင်နိုင် မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပေးစာတစောင်ကို ဧရာဝတီက လက်ခံရရှိ ထားပါတယ်။ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ- ထိုင်း အမျိုးသမီး ဘောလုံးပွဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်နေ့က ကွင်းလယ်ဒိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသူ၊ ဓာတ်ပုံ- မစုစုနွေး ဖေ့စ်ဘုတ်
လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကြီးက အမျိုးသမီး ဘောလုံးဒိုင်ကို ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က သေဒဏ်ပေးလိုက် တဲ့အဖြစ်ကို စာရေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာက နာမည်ကြီး မီဒီယာဆိုတာတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၊ အတိုက်အခံ နာမည်ကြီးတွေနဲ့ ဆိုရင် လက်ရှောင်တတ်ကြလို့ မီဒီယာတာဝန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကျေကျေပွန်ပွန် ဘက် မလိုက်ပဲ ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဧရာဝတီကို ပဲ စာရေးလိုက်ရတာပါ။
တနေ့က မြန်မာနဲ့ ထိုင်း အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲကို ကျနော်တို့လည်း မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ မြန်မာအသင်းကိုပဲ အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာအသင်းရှုံးလို့ အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ချိန်မှာ ကျနော်တို့ လေးစားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ၊ လယ်သမား အရေး၊ အလုပ်သမားအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသေးစားလေး စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မစုစုနွေး ရဲ့
ဖေ့စ်ဘုတ် ကို သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်မှုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာ- ထိုင်း အမျိုးသမီး ဘောလုံးပွဲမှာ ကွင်းလယ်ဒိုင် ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူ အိန္ဒိယနိုင်ငံက Maria Rebello ကို အားမလိုအားမရနဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ရဲ့ စတေးတပ်စ်မှာ အခုလို စရေးပါတယ်။
“ကွင်းလည်ဒိုင် ကုလားမက်ို ဆုံးမမယ့်သူ မရှိကြ တော့ဘူးလား”
မစုစုနွေး အဲဒီလို ရေးပြီးအောက်မှာ ကွန်မန့်တွေက ထောက်ခံသူတွေ၊ ထောက်ပြသူတွေနဲ့ အတော်ပွဲ ဆူသွားခဲ့ပါတယ်။
“အမှန်တော့ ဒိုင်က ခရစ်ယာန် ခက်တာက လူမျိုးရေး ခွဲခြားနှိမ့်ချလိုတဲ့ သဘောနဲ့အမဲမြင် ကုလားထင်နေ တဲ့ မြန်မာပြည် လို မယဉ်ကျေးတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းမှာ အရိုးစွဲအမြစ်တွယ်နေရတဲ့ကြားထဲ မစုစုနွေးတို့လို .. လူ့အခွင့်အရေးတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေပါတယ် ဆိုတဲ့သူတောင်သုံးနှုံးနေမှတော့ မြန်မာ့ လူအဖွဲ့အစည်း ဟာ ကောင်းဖို့အလားအလာရော ရှိသေးရဲ့ လား လို့မေးခွန်းထုတ်ရတော့မယ် ထင်တယ်”
“နေမတတ်လို့ ဝင်ရေးကြည့်အုံးမယ် မစုစုနွေးပြောတာက ကုလားမလို့ သုံးနုံးထားတာလေ မွတ်ဆလင် မလို့ သုံးနုံးထား တာမှ မဟုတ်တာ ခရစ်ယန် တို့ မွတ်ဆလင်တို့ ဆိုတာ ဘာသာကို ပြောနေတာ ဘာသာ နဲ့ လူမျိုး ကို ကွဲပြားအောင် ကြည့် ပါအုံး အကိုတို့ ရာ”
“လူအခွင့်အရေး လုပ်သူကြီးကဒီလိုစကားမျိုးထွက်သတဲ့လား! အမရေ ကလားလိူ့ပြောလို့မနာဘူး ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေ ပြောနေကြတာရိုးနေပီ။ ဒါပေမယ့် လူအခွင့်အရေး လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးက ဒီလိုပြောတာ တော့ အပြောနဲ့အလုပ် က တော့ တောင်နဲ့မြောက်ပဲ”
အဲဒီလို ရေးသားဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေအပြီး မစုစုနွေးရဲ့ နောက်ထပ်ရေးလိုက်တဲ့ စာသားက အတော်တုန် လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ ရတာပါ။
“အဲဒီ ကုလားမ ကို သတ်ပြစ်လိုက်”တဲ့။
ကဲ ဧရာဝတီနဲ့ ဧရာဝတီ ပရိသတ်များ စဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာ။ ဒီစာကို ဧရာဝတီကတော့ ဖော်ပြပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အားကိုးတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဦး ဆောင် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေက ဒီလိုမျိုး ပြောနေ ကြ ပြီဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘယ်သူ့ကို အားကိုးရပါတော့မလဲ။
ကိုလင်း ( ဒဂုံ )